DHAMMA GARDEN CENTRE: May 2010
Foolish leaders of the world
have been expecting to get peace
only through war.
That’s why they are building up their power
with soldiers and weapons,
talking glibly about peace.
Posted by Dr. Ashin Indaka at 10:21 AM
ကိုလိုနီခေတ်က မြန်မာအချို့ဟာ သူတို့ မြန်မာစာညံ့ပါတယ်
ဆိုတာကိုပဲ အသားယူစရာလို့ အောက်မေ့ပြီး
"ကိုယ်တို့ကတော့ မြန်မာစာ ဆင်းရဲတယ်" လို့ ကြွေးကြော်လေ့ရှိကြတယ်။
မြန်မာစာဆင်းရဲတယ် ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာတော့ ချမ်းသာသလိုလို။
တကယ်က သေသေချာချာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် သူပြောနေတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားကလည်း
ဘိုကြက်ချေး အင်းဂလစ်၊ ဖွတ်ကျား အင်္ဂလိပ်စကား။
ကနေ့ လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့
ဒီလို အခြောက်တိုက် လေလုံးထွားတတ်သူ မရှိသလောက် ရှားသွားပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ပါးစပ်က မြန်မာစာညံ့ပါတယ်လို့ ထုတ်မပြောပေမယ့်
ရှိသမှ ရိုးရိုးသာမန် အရပ်သားထဲမှာ မဟုတ်၊
အနုပညာစာပေနယ်ထဲမှာ ၀င်ဆန့်နေပြီး မြန်မာစာညံ့ပြနေတာ။
အဓိက ဆက်သွယ်ရေးမဏ္ဍိုင်အဖြစ် မြန်မာစာ၊
မြန်မာစကားသုံးနေသူ ဖြစ်ပါလျက် မြန်မာစာ ဟုတ္တိပတ္တိ မတတ်တာ။
တေးဂီတသမားဆိုတာ ဘာသာစကားကို သုံးရသူပဲ ဖြစ်တယ်။
ခေတ်ပေါ် ဘာသာစကားကို သူလိုငါလို ပြောတတ်၊ ရေးတတ်တဲ့အပြင်၊
အထိုက်အလျောက် ကျွမ်းဝင်ဖို့ လိုပေလိမ့်မယ်။
သီချင်းကြီး၊ သီချင်းခန့်ဆိုတာတွေကို လေ့လာဖူးကာ
ပျို့၊ ရတု၊ ဂန္ထ၀င်ကဗျာများကိုလည်း ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိသင့်တယ်။
အခုတော့ ရှေးဟောင်း ဂန္ထ၀င်ဆိုတာ မပြောနဲ့ ၊
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃-၄၀ က ကာလပေါ်တေး ကိုတောင် နားဝေးနေသူတွေ တွေ့နေရတယ်။
နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ဆိုတာ ခေတ်ဟောင်း တေးရေးဆရာများထဲမှာ
အရပ်သုံး ခေတ်ပေါ်စကားကို အလွယ်ဆုံး သုံးနှုန်းရေးဖွဲ့တတ်သူပါ။
ဒါတောင် သူ့ရဲ့ "လက်ရေတပြင်တည်း" ကို
ရွှေဥာဏ်တော်စူးပြီး "လက်ရေတပြင်စီး" ရယ်လို့ လုပ်လိုသူ ပေါ်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။
ဒေါင်းလန်းကြီးနဲ့ စားကြတယ်ဆိုတော့ ထမင်းကို နှိုက်တဲ့ လက်အသီးသီးက
ဟင်းရည်တွေဟာ တပြင်တည်း စီးဆင်းနေတယ်ပေါ့လေ။
"လက်ရည်တပြင်တည်း" ဆိုတာ "တစိတ်တည်း တ၀မ်းတည်း" လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်တယ်လို့
၀ိုင်းရေးကြ ထောက်ပြတော့မှ "လက်ရည်တပြင်တည်း" ဖြစ်လာတော့တာ။
ဒါတောင် "မင်းဂံဘုတ်" သီချင်းထဲက တောသူမလေး ခေါင်းပေါ်တင်လိုက်တာဟာ
"ရှန်တဘက်" မဟုတ်ပါဘူး။ "ရှာတဘက်" ပါလို့ အဲဒီခေတ်ကို
ကောင်းကောင်းမီလိုက်သူ လူထုဒေါ်အမာက ရှင်းပြပေမယ့်
ခုထက်ထိ ဒီသီချင်းဆိုသူတိုင်းက "ရှန်တဘက်" နေတုန်းပဲ။
မြို့မငြိမ်းကျတော့ နန်းတော်ရှေ့ထက် ခေတ်စကားကို
ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင် ကွန့်ပြီး သုံးတတ်သူဖြစ်တယ်။
ခေတ်ဂီတပညာရှင်ကြီးတွေ ခြောက်ပါးမှောက်ကုန် တော့တာပါပဲ။
(အယ်ဒီတာခင်ဗျာ။ ။ ငါးပါးမက မှောက်ကုန်တယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်)
ဒါကို ဆရာရဲ့ "ပျို့မှာတမ်း" သီချင်းလေးကို ပြန် ဆို ကကြ သံကြားတိုင်း ခံစားမိတယ်။
ပထမ မေဆွိ။ မနေ့တနေ့က ရီရီသန့်။
သူတို့ကို သင်ကြားပြသပေးလိုက်တဲ့ ဆရာသမားများက ညွှန်ပြသလို
သူ့ခမျာ များ ဆိုကြရတာ ဖြစ်မှာပေါ့။
"စားစား သွားသွား- နေ နေ၊ မောင့်အပေါ် ဗွေမယူပေါင်ရှင်" တဲ့လေ။
အရေးအမှတ်မှားပြီး ဒီလို ဖြစ်သွားရသလား၊
လူတတ်လုပ်ပြီး တမင်ပြင်သလားတော့ မသိဘူး။
ကြည့်ရတာ "မောင့်အပူပွေသူ" ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားအသုံးကို ဥာဏ်မမီလိုက်တာနဲ့ ထင်ရာကြဲလိုက်ကြပုံပါပဲ။
"အပူပွေ" တယ်ဆိုတာ "ဗျာပွေ" တယ်နဲ့ အတူတူပါပဲ။
မိန်းကလေးက မောင့်အတွက် ပူပန်ရတဲ့ အပူတွေ ပွေနေသူပါ၊
ဗျာပွေရသူပါလို့ ပြောနေတာ ဖြစ်တယ်။
စားလေရာ သွားလေရာ နေလေရာ သူ့မှာ မောင့်အတွက် ဗျာပါပွေရတယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။
မောင်ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်စားစား၊ ဘယ်မှာနေနေ၊ ဗွေမယူပါဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး။
တနေ့က ဆရာငြိမ်းရဲ့ "မပြီးသေးသော ပန်းချီကား" သီချင်းကို
ဆိုသွားကြတာတွေ ကြားလိုက်ရ ပြန်တယ်။
"ချစ်သူဟာလဲ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရောက်နှင့်တဲ့ကာမြင်" ရယ်လို့ ဖြစ်တယ်။
ဒါကို "ရောက်နှင့်ခဲ့တာမြင်" လို့ လုပ်သွားကြလေရဲ့။
သူ့ခမျာများ "တဲ့ကာ" မြန်မာစကားအသုံးကို မကြားဘူး ရှာကြဘဲကိုး။
"သွားတဲ့ကာ၊ လာတဲ့ကာ" ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း မြန်မာစကားမှာ ရှိပါတယ်။
သူ့နေရာနဲ့ သူ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့သူ ထိမိတဲ့ အသုံးအနှုန်းကလေး ဖြစ်တယ်။
ဒါနဲ့ "ခဲ့တာ" အစားဝင်လို့ မရပါဘူး။
မြန်မာစကားမှာ "လေသွေးတယ်" ဆိုတာ တော်တော်ရိုးပါတယ်။
နှင်းဆီ အဖူး အငုံလေးတွေကို လေသွေးလိုက်တော့
ဟိုယိမ်းဒီယိမ်းနဲ့ လုပ်လီလုပ်လဲ့ ဖြစ်နေတာကို ခေတ်ဟောင်း တေးရေးပညာရှင်က
"သွေးကာချီ ဖူးပွင့်ငုံဝေစီ" လို့ လှလှပပလေး ဖွဲ့နွဲ့ထားပါတယ်။
"ပွေ့ကာချီ ပွေ့ကာချီ ဖူးပွင့်ငုံဝေစီ" လုပ်ပစ်လိုက်တော့ ပျက်ရော။
ရာဂုမ္မတ္တကြီးတဦးက ပွေ့ချီသွားတာကို မြင်လိုက်ရတော့တယ်။
သက်ရှိ ခေတ်ဟောင်းတေးရေးဆရာတဦးကတော့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေ့ဆုံခန်းမှာ
သူ့သီချင်းစာသားကို မှားဆိုတဲ့အတွက် ဒုက္ခရောက်ရပုံကို
သူ့ရေးရင်းက "ရှမ်းမလေးတွေ အချောရယ် ပေါတယ်" လို့ရေးတာ၊
ချောမောလှပတဲ့ ရှမ်းမလေးတွေ ပေါများ ပါတယ်ပေါ့။
ဒါကို "ရှမ်းမလေးတွေ ချောတယ် ပေါတယ်" လုပ်ပစ်လိုက်တော့ သွားရော၊
ရှမ်းမလေးတွေဟာ ချောလဲ ချောတယ်၊ ပေါလဲ ပေါတယ်လို့ ဖြစ်သွားလေတော့တာပ။
နိုင်ငံကျော် သင်္ကြန်သီချင်းတပုဒ်မှာ စာသားက
"မြနန္ဒာ ရေညိုညို ရစ်ကာသန်းတဲ့ ရွှေမန်းတောင်ရိပ်" ရယ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုအံ့ကြီး သီဆို အသံသွင်းထားရမှာလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ ကြားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို နောက်ပါက် အဆိုတော်တဦးက
"မြလေးလေးနန္ဒာ ရေညိုညို ရစ်ကာသန်းတော့" ရယ်လို့ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။
"မြနန္ဒာ" ကို "မြလေးလေးနန္ဒာ" လုပ်ပစ်တာက ရှိရင်းစွဲ
စာသားနဲ့တင် စည်းဝါးကိုက်အောင် မဆိုနိုင်ရှာလို့ - လို့ နားလည်ရတယ်။
"ရစ်ကာသန်းတဲ့" ကို "ရစ်ကာသန်းတော့" လုပ်လိုက်တာကတော့
ရှေးအတိတ်တဘောင်က "အသက်ကလေးရယ်တဲ့ ရှည်စေလို၊
မြနန္ဒာရေညိုသန်းတဲ့ (တယ်) မန်းတောင်ရိပ်ခို" ရယ်လို့ ရှိတယ်။
ဒါကို သီချင်းထဲမှာ သုံးထားတာပဲ ဖြစ်တယ်။
"ရေညိုသန်းတော့ မန်းတောင်ရိပ်ခို" ဆိုတော့ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတော့ဘူး။
"ရေညိုသန်းသောအခါ မန်းတောင်ရိပ်ခို" ဆိုတာ စကား အဆက်အစပ်ကို မရှိတော့ဘူး
ပါရမီရှင်က ဖွဲ့သီရေးစပ်ထားတဲ့ တေးဂီတများဟာ
တိုင်းပြည်ရဲ့ အနုပညာရတနာများပဲ ဖြစ်တယ်။
နောင်လာနောက်သားများက တရိုတသေ ထိန်းသိမ်းကြရဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။
ကိုယ်စာပေဗဟုသုတ ခေါင်းပါးတိုင်း လျှောက်ပြီး ဖျက်ဆီးပစ်နေဖို့ မကောင်းဘူး။
အနုပညာသမားရယ်လို့ လုပ်ချင်မှတော့ လေ့လာရမှာပေါ့။
စီးဝါးတတ်ကျွမ်းအောင် လေ့ကျင့်ရသလို တေးထဲမှာ
သုံးထားတဲ့ ဘာသာစကားကိုလဲ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာအပ်တယ်။ ခေတ်ဟောင်းအဆိုတော်ကြီး ဒေါ်မေရှင်က တွေ့ဆုံခန်းတခုမှာ
"သီချင်းစာသားတွေကိုတော့ ဖျက်မပစ်ကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ချင်တယ်ကွယ်" လို့
ဒါ တာဝန်သိ အနုပညာသည်တဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံပါပဲ။
သီချင်းဆိုတယ်ဆိုရာမှာ စကားသံပီဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။
ကနေ့ခေတ် လူငယ်များ မပီကလာ ဆိုကြတာကို ပြောကြရေးကြ လှပါပြီ။
စကားမပီတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်မိကြောင်း ကျွန်တော်လည်း ရေးဖူးပြီ။
"လျှပ်ပန်းခွေနွဲ့" ကို သီဆိုသွားသူတဦးက
"ဘ၀ဂ်စောင်းအောင်" ကို "ဘ၀ဂ်ဆောင်းအောင်" လို့ ဆိုသွားတဲ့အကြောင်းပါ။
"စ" သံ နဲ့ "ဆ" သံကို မပီဘဲ ပြောကြဆိုကြတာ ရန်ကုန်မှာ ခေတ်စားနေပေမယ့်
သီချင်းဆိုရာမှာ ပရိသတ်ရှေ့မှာတော့ ပီအောင် ကြိုးစားဖို့ ကောင်းတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြား ကြော်ငြာတခုမှာ "ဝေဒနာ" ကို "ဝေသနာ" လို့ ပြောသွားတာ။
"စောင်းတန်း" ကို "ဇောင်းတန်း" လို့ ဖတ်သွားတာကို (အမှန်က "စောင်းဒန်း") လဲ
ကြားလိုက်ရသေး။ ကြော်ငြာတခုမှာတော့ ရေးပေးသူက ကာရန်ယူပြီး ရေးပေးလိုက်ပုံ
ရပါတယ်။ ဖတ်တဲ့သူက မဖတ်တတ်တော့ ကိုးရိုးကားရား ဖြစ်သွားရော။
"မြန်မာပြည်တ၀န်း နာမည်ဆန်း" တဲ့။ (ဖြစ်သင့်တာက "မြန်မာပြည်တ၀န်း
နံမည်ဆန်း")။ စာအတိုင်း ဖတ်နေစရာ မလိုပါဘူး။
"ရေးတာက အမှန် ဖတ်တာက အသံ" ဆိုထားတာပဲ။
"နံမည်" လို့ဖတ်မှ "မြန်မာပြည်" နဲ့ ကာရန် ညီမှာပေါ့။
အပျင်းပြေ နားထောင်ကြည့်မိရင်း ပြုံးမိတဲ့ ကြော်ငြာတခုကတော့
ဘယ်မြန်မာလူမျိုးကမှ အဲဒီလို မအော်ဘူး။
"အမလေး မြန်မာစကား မပြောတတ်လိုက်တာ၊ ကယ်ပါဦး" လို့ပဲ
"ကျင်းပလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်း"၊ "သွားရောက်လိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်း" တဲ့။
မြန်မာစကားမှာ "လိမ့်" နဲ့ "မှာ" တွဲသုံးတာ ရှိကို မရှိဘူး။
ဒီလူတွေ ဒီအသုံးအနှုန်းကို ဘယ်ကများ ကောက်ရထားပါလိမ့်လို့သာ အံ့သြမိ ရတော့တယ်။
ကြားသိရသမျှ မြန်မာစာ မြန်မာစကား ဆင်းရဲကြပုံတွေထဲက
သိသာရုံ အကျဉ်းမျှ တင်ပြလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
[မြင့်မြတ်သူ စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့
မောင်သာနိုးရဲ့ မြန်မာစကားနဲ့စာပေ စာအုပ်၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မေလ၊
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:52 AM
ငါအိုသွားတဲ့အခါ ငါဟာ အရင်က ငါမဟုတ်တော့ဘူး၊
ငါ့ကို နားလည်ပေးပါ၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထား ဆက်ဆံပေးပါ။
ချိနဲ့နဲ့လက်တွေနဲ့ ထမင်းဟင်းတွေ အင်္ကျီပေါ် လောင်းမိတဲ့အခါ၊
ဖိနပ်ကြိုးတွေ ချည်ဖို့မေ့သွားတဲ့အခါ၊ ငါ့ကို မရွံပါနဲ့၊
ငယ်ငယ်တုန်းက ငါသင်ပေးခဲ့တာတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး သတိရပေးပါ။
အပ်ကြောင်းထပ်မက ပြောဖူးတဲ့ စကားတွေကို ငါပြန်ပြောမိတဲ့အခါ စကားမဖြတ်ဘဲ
ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ရာဝင်တိုင်း တစ်ထောင့်တည
ပုံပြင်တွေကို မရိုးအောင် ပြောရင်း ငါချော့သိပ်ခဲ့ဖူးတာတွေကို သတိရပေးပါ။
မလှုပ်မရှားနိုင်လို့ ရေချိုးဖို့ အကူအညီ လိုတဲ့အခါ ငါ့ကိုမငြိုငြင်ပါနဲ့၊
ငယ်ငယ်တုန်းက ချော့တစ်လှည့် ခြောက်တစ်ခါ ရေချိုးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မြင်ယောင်ပေးပါ။
ခေတ်သစ်၊ နည်းပညာသစ်တွေကို မသိနားမလည်ခဲ့ရင် ငါ့ကိုမလှောင်ပါနဲ့၊
ငယ်ငယ်တုန်းက “ဘာကြောင့်”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကို စိတ်ရှည်စွာ
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ နွမ်းလျပြီး လမ်းမလျောက်နိုင်တဲ့အခါ
ခွန်အားပါတဲ့ လက်တစ်စုံနဲ့ ငါကိုကူတွဲပေးပါ၊
တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းလျောက်ကျင့်ပေးခဲ့ ဖူးတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး သတိရပေးပါ။
အသက်ကြီးလာလို့ စကားပြောရာမှာ ရှေ့နောက်မညီဘဲ အကြောင်းအရာတွေကို
ငါမေ့သွားတဲ့အခါ အချိန်ပေးပြီး စဉ်းစားခွင့်ပေးပါ၊ စကားအကြောင်းအရာတွေက
ငါ့အတွက် အရေးမကြီးပါဘူး။ ဘေးကနေ ငါပြောသမျှကို နားထောင်ပေးရင် ကျေနပ်ပါပြီ။
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အိုစာသွားတဲ့ ငါ့ကိုကြည့်ပြီး ၀မ်းမနည်းပါနဲ့၊
အရင်တုန်းက လူ့ဘ၀ တက်လမ်းအတွက် ငါလမ်းညွှန်ခဲ့သလို
အခုအချိန်မှာ ငါ့ဘ၀နောက်ဆုံး အချိန်တွေအတွက် အဖော်ပြုပေးပါ။
အချစ်နဲ့အေးမျှမှုတွေကို ငါပြုံးပြုံးလေး လက်ခံမှာပါ။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:43 AM
ဟိုတလောဆီက သတင်းစာတွေထဲမှာ သြစတြေးးလျနိုင်ငံမှာ သြစတြေးးလျနိုင်ငံသားတွေက အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံနေတဲ့အကြောင်း၊ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေ အနှိမ်ခံနေရကြောင်းနဲ့ (တကယ်တော့ နိုင်ငံတိုင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကို နှိမ်နေတာပါ) ဒါကိုမကျေနပ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမှာရှိတဲ့ သြစတြေးးလျသံရုံးမှာ သွားဆန္ဒပြကြတဲ့ အကြောင်းတွေ နေ့တိုင်းနီးပါး ဖတ်နေရတယ်။ ဘာလို့ ဒီနေ့ခေတ်အထိ လူမျိုးရေး ခွဲခြားခွဲခြား ဆက်ဆံနေရတာလဲ။ စဉ်းစားကြည့်တော့……
၂၀၀၃ - ခုနစ်ကစလို့ သုံးနှစ်ကျော် လေးနှစ်နီးပါး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မွန်ဘိုင်း (ဘုံဘေ) မြို့မှာ ပညာရေး ကိစ္စနဲ့ နေခဲ့ရတယ်။ အလွှာပေါင်းစုံက လူပေါင်းစုံကို ထဲထဲဝင်ဝင် တရင်းတနှီးဆက်ဆံခွင့်ရခဲ့တယ်။
စာပို့သမား (Postman) နဲ့လဲ သိခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့။ တစ်နေ့ ဒီစာပို့သမား စာလာပို့ပြီး ပြူတင်းပေါက်ကနေ အမှိုက်တွေပစ်ချတယ်။ မပစ်ချဘို့ပြောတော့ “ဒီအမှိုက်ထဲမှာ လိပ်စာမပါဘူး။ အမှိုက်ပစ်ချသူနောက်ကို ဘယ်လိုမှ ခြေရာခံလိုက်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ ပြဿနာ မတက်နိုင်ပါဘူး” တဲ့။ ပြောပြောဆိုဆို အမှိုက်တွေကို ဆက်ပစ်ချတယ်။
အော်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကုလားတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာ၊ နှိမ်နေတာ ဒါ့ကြောင့်ကိုး။
တကယ်တော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဟာ အကြီးကြီးပါ။ ပညာရှင်တွေလဲ ပေါမှပေါ။ ၀ိဇ္ဇာ၊ သိပံ္ပ၊ ကြိုက်တဲ့ဘက်ကစမ်း၊ ယှဉ်ဝံ့တဲ့ ယှဉ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးပါ။ စီးပွါးရေးမှာရော၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံထက် သန်းကြွယ်သူဌေးဦးရေပိုများဆိုပဲ။ ဘာသာရေးဘက် လှည့်ကြည့်အုံးမလား။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘာသာပေါင်းစုံ အကုန်ရှိတယ်။ အမယ်၊ နိုင်ငံရေးမှာလဲ အထင်မသေးနဲ့။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုပီး ဂုဏ်ယူနေလေရဲ့။
ခြုံပြီးပြောရရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အစစအရာရာ ထိတ်တန်းကချည်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေ အနှိမ်ခံကြရတယ်။ မျက်နှာငယ်ကြရတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ ရှင်းပါတယ်။ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ စာပို့သမားလို ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရော စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတွေ များနေလို့ပါပဲ။
ဟိုနိုင်ငံ ဒီနိုင်ငံ အသွားအလာများလာပြီး နိုင်ငံခြားမှာ အနေများလာလေ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်တဲ့စိတ် (မျိုးချစ်စိတ်) ပိုပြင်းထန်လာလေပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို နှိမ်တာ လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို အထင်သေးစကားပြောလာရင် မခံနိုင်လွန်းလို့ ပြန်ပြောရတာ ဖြေရှင်းရတာလဲ အမောသား။ ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုလဲ အသိတရားမြင့်မြင့် အဆင့်အတန်းရှိရှိ သိပ်နေစေချင်တာပဲ။
အိမ်တစ်အိမ်အနီးမှာ (သို့) တိုက်ခန်းအတက် လှေခါးဒေါင့်တစ်နေရာမှာ ကွမ်းတံထွေးတွေ့ရင် ဗမာရှိတာ သေချာတယ် လို့ မလေးရှားရောက် ဗမာလေးတစ်ယောက်က ပြောဘူးတယ်။ သာရေးနာရေးကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့များ အိမ်တစ်အိမ်အိမ်ကို ကြွတဲ့အခါ လှေခါးဒေါင့်တွေမှာ ကွမ်းထွေးတွေ နီရဲနေရင် သူတို့အစား မျက်နှာပူရတော့တာပဲ။ တရားခံက ကိုယ့်လူတွေလေ။ ဒီလိုတွေ့ကရာနေရာတွေမှာ ကွမ်းထွေးတွေထွေးလို့ ဒို့လူမျိုးတွေကိုတော့ အထင်သေးတော့မှာပဲလို့ တွေးမိပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ကွမ်းထွေးကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ထွေးတာဟာ ကိုယ့်မှာ အသိတရားနဲ့ အဆင့်အတန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတာပဲမဟုတ်လား။
ဗမာတွေနဲ့စကားပြောရတာ အတော်ဖီးအောက်တယ်၊ စကားပြောရင်းလဲ ကွမ်းဝါးနေတာပဲ၊ ပါးစပ်တွေက ရဲပြီး သွားတွေက မဲလို့။ ဒီကြားထဲ ကွမ်းထွေးကို ပစ်ခနဲထွေးလိုက်သေးတယ်၊ အတော်မသတီစရာ ကောင်းတာပဲလို့ တရုတ်မကြီးတစ်ယောက်က ပြောဘူးတယ်။
ဒီတရုတ်မကြီးပြောတဲ့စကားကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားပြီး ဆင်ခြင်သင့်တယ်။ သူပြောတဲ့ စကားထဲမှာ “ဗမာတွေ” လို့ သုံးနှုန်းတဲ့အတွက် ကိုယ်တို့လူမျိုးအကုန်လုံး ရွံစရာလူမျိုးတွေဖြစ် ကုန်တယ်။ ငါးခုံးမ သုံးလေးကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ (ငါးခုံးမ က တစ်ကောင်မကတော့ဘူး)။ ကွမ်းစားတဲ့သူကြောင့် ကိုယ့်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံး အထင်သေးခံရတာကို သဘောပေါက်ရမယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကွမ်းစားသူတွေနဲ့ ယဉ်ပါးလာတဲ့ ကိုယ်တို့အတွက် မထူးဆန်းပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံသားအနေနဲ့ မသတီ ရွံရှာဖွယ်ရာ လူမျိုးဖြစ်သွား တယ်ဆိုတာ နားလည်ရမယ်။ ကိုယ်တောင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းဆရာတော်တွေ ကွမ်းဝါးပြီး ကွမ်းထွေးတွေကို ကွမ်းထုတ်အိပ်ခွံ သေးသေးလေးထဲ ထွေးထည့်နေတာကို မြင်ရရင် အတော်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိ သေးတယ်။
နိုင်ငံခြားကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်မိသားစုတစ်စုတည်းကိုသာ ကိုယ်စားပြုတော့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုတာပါ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အပြုအမူ၊ ကိုယ်ပြောတဲ့အပြောအဆိုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားပြုတဲ့ ပြောတဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာ။
သြစတြေးးလျနိုင်ငံမှာ သြစတြေးးလျနိုင်ငံသားတွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံနေ ပြီ။ အသိတရားနဲ့ အဆင့်အတန်း အင်မတန်နိမ့်ကျတဲ့ စာပို့သမားလို ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီး ရော စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ သူတွေ များနေလို့ပါပဲ။ ဒို့နိုင်ငံသားတွေကိုရော ရောက်လေရာနုိုင်ငံတွေမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရပြီလား။ အနှိမ်ခံနေရပြီလား။
(ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ထည့်မစဉ်းစားပဲ အတ္တကြီးမားစွာ) စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ တွေ့ရာနေရာမှာ
ကွမ်းထွေးတွေကို မဆင်မခြင် ထွေးနေ လို့ကတော့……
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:21 AM
နောက်ထပ်မီးကူးချင်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်
လူမှုရေး လုပ်ချင်လို့ကတော့ လုပ်သာလုပ်ပါ။
Some of the best music was composed
Beethoven, who was deaf.
Some of the best poetry about nature was written
Milton, who was blind.
One of the greatest leaders,
Franklin Roosevelt was served fromawheel chair.
Those who are born to achieve, turn scars into stars.
Posted by Dr. Ashin Indaka at 6:27 PM
Other people don’t make you
They only reveal what you are.
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:11 AM
That no matter how goodafriend is, they are going to hurt you every once inawhile and you must forgive them for that.
That the people you care about most in life, are taken from you much too soon.
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:29 AM
“ဇာတိမာန်”ဟူသော စကားကိုကြားရသည့်အခါတိုင်းတွင် ကျနော်၏စိတ်ဝိဉာဉ်သည် ငွားငွားစွင့်စွင့်ပွင့်လန်း လျက်ရှိသော ပဒုမ္မာကြာပွင့်ဆီသို့ ခိုဝင်လိုပါလျက် ပန်းမာလ်ကင်း သော၊လူသူကွယ်ရာ တောအုပ်တွင်းသို့ ညှိုးငယ်စွာ
ပျံသန်း ပြေးလွှားပုန်းအောင်းသွားရ သော ပျားပိတုန်းပမာ ရှိလေ၏။
“ဇာတိမာန်”ဟူသည် အမျိုးကိုမှီ၍ တက်ကြွအပ်သော စိတ်ထားဟု ဆိုကြပါ၏။ ကျနော့်မွေး ဇာတိ တိုင်းပြည်ကား သာကီဇာနည်တို့ မင်းလုပ်ခဲ့သောနေပြည်ဟုလည်း ရှေးဆိုရိုးရှိပြန် ပါ၏။ တိုင်းကားပြည်ကြီးရွှေထီးဆောင်းစဉ်ကာလကို ပြန်ပြောင်းတမ်းတကြရင်း “ယိုးဒယားနဲ့တိုင်းခြားကိုပါ တိုက်ခိုက်ကာ အောင်ခဲ့တာ ”ဟူ၍လည်း မကြာခဏ ဟစ်ကြွေးလေ့ရှိပါ၏။ ထို့ပြင်တဝ မျက်မှောက် ကာလတွင် လည်း ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော် သစ်ကြီးဆီသို့ အောင်မြင်စွာချီတက် နိုင်လျက်ရှိကြောင်း နားနှင့် မဆန့်အောင် ကြားနေရ ဆဲဖြစ်ပါသည် ။
ကျနော်သည် ဇာတိမာန်နှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အခြားအခြားသော သာကီနွယ်တို့နည်းတူ မာန်တက်ချင်သူ ဖြစ်လေရာ “ငါတို့လူမျိုးသည် အထက်ကဆိုသကဲ့သို့ မြတ်သောအမျိုးအနွယ်ဟူသည် ဟုတ်မှန်သေးပါ၏လော ” ဟုစေ့ငုမိသည့်အခါတိုင်း နှလုံးစိတ်ဝမ်း မချမ်းမသာဖြစ်ရမြဲ ။
စိတ်ဝိဉာဉ်ပျားပိတုန်း လူဖြစ် ရှုံးသည်ဟု ခံစားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများစွာအနက် ကျနော် မျက်မြင်ဒိဋ္ဌ ကြားသိခဲ့ရသည့် “ အောင်ချို”အမည်ရှိလူငယ်တယောက်၏ ဘဝ ဇာတ်လမ်းသည်လည်း တခုအပါအဝင် ဖြစ်လေသည် ။
အောင်ချိုကား အသက်နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ဝန်းကျင်၊ မော်လမြိုင်ဇာတိ မွန်မြန်မာကပြား လူငယ် လေးဖြစ်ပါသည်။ မွေးချင်းငါး ယောက်အနက်သူသည် တတိယမြောက်ဟု ဆိုပါသည်။ အကိုအကြီးဆုံးမှာ ဘန်ကောက် တွင် လက်သမားလုပ်သည်ဆို၏။ သူ့အထက်အမကား မော်လမြိုင်တွင်ပင်အိမ်ထောင် ရက်သားကျခဲ့ပြီး ယခုအချိန် တွင်မူ လင်သားဆုံးပါးသွား လေသဖြင့် မုဆိုးမဘဝနှင့် ရှိနေသည် ။ သူ့အောက်က အငယ်နှစ်ယောက်မှာ မမာ မကျန်း ဖြစ်နေသော မိခင်ကြီးနှင့်အတူနေထိုင်လျက် မော်လမြိုင်မှာ ကျောင်းတက်နေကြဆဲ ။ အငယ်နှစ်ယောက်နှင့်မိခင်ကြီးအတွက်အောင်ချိုကပင် ထောက်ပံ့ပေးနေရသည်။ကျနော်နှင့်အောင်ချို တွေ့စဉ်ကသော် အောင်ချိုတယောက်၊ ဆွေမရှိမျိုးမရှိ ၊ဖူးခက်ကို ရောက်နေသည်မှာ ဆယ်နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီ။
ဖူးခက်မြို့မှာ ကျနော်ဖွင့်ထားသော ဈေးဆိုင်ကို ဝင်ထွက်သွားလာရင်း အရောင်းတာဝန်ခံ အာကာတို့နှင့် အလွမ်းသင့်ရာက ကျနော်နှင့်ပါ ရင်းနှီးလာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်ခန်းငှားမနေတော့ပဲ တကိုယ်ရည်တကာယ သမားပီပီ ကျနော့်ဆိုင် အပေါ်ထပ်အခန်းလွတ် မှာလာနေသည်။
သူအလုပ်နားသည့်ရက်များတွင် ဆိုင်အလုပ်ကို ဝိုင်းကူသည်။ ဆိုင်တာဝန်ခံအာကာသည် လည်း ထိုင်းစကားကို လည်လည်ပတ်ပတ်မပြောတတ်လေရာ မြန်မာလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လှည့်လည်ရောင်းချသော ထိုင်းဈေးကား ၊ထိုင်းဖောက်သည်တို့ ဈေးဝယ်လာသည့်အခါ မြန်မာ့ပစ္စည်းတို့ကို မြန်မာလိုခေါ်ပြောတတ်သော အောင်ချို့ကိုပင် အားကိုးရသည်။ ထို့ပြင်အိမ်မခန်အရပ်က ကျနော်သီးခြားနေသော့အိမ်မှာ ရေပိုက်ပျက်လျှင် မီးပျက်လျှင်ပြင်ဆင် ပေးသည်။ သူသည် သေတ္တာမှောက် အကုန်လုပ်တတ်သည်။
ဖူးခက်ရောက်မျက်နှာဖြူတို့ အိမ်အသစ်ဆောက်လိုလျှင်၊ ပြင်ဆင်လိုလျှင် အောင်ချိုက ပုတ်ပြတ်စံနစ်ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည်။ သူ့လက်အောက်မှာ အလုပ်သမား ဆယ်ယောက်ခန့်ရှိသည်။ အောင်ချို့အဖေမှာ လက်သမားဆရာ ဖြစ်၍ အဖေကို ဝိုင်းကူ ရင်း လက်သမားအတတ်ကို သူတတ်မြောက် ခဲ့ဟန်တူသည်။
အောင်ချိုကား ဖူးခက်သို့မရောက်မီ စံခလပူရီအမည်ရှိ ထိုင်းနယ်စပ်မြို့ကလေးရှိ ထိုင်းရဲ တပ်ကြပ်ကြီးတယောက်ပိုင် ကြက်ခြံတွင် နှစ်နှစ်ခန့် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုစဉ်က သူ့အသက်မှာ ဆယ့်ငါးနှစ်ဝန်းကျင်ပင် ရှိဦးမည်။အောင်ချိုသည်လစာဟူ၍ မယ်မယ်ရရ မရခဲ့။ သူနေ့စဉ်မှီဝဲရာကား တလုံးကို နှစ်ဘတ်ခန့် တန်သော ကြက်ဥတည်း။
လေးငါးခြောက်လဆက်တိုက် လုပ်ခမရသည့်အခါအောင်ချိုသည် ကြက်ခြံမှ ထွက်ပြေးလျက် ရာဘာခြံတခုတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရာမှ ကြက်ခြံပိုင်ရှင် ထိုင်းရဲတပ်ကြပ်ကြီးက ပြန်တွေ့သွားပြီး မျက်နှာတခုလုံး စုတ်ပြတ်သတ်ရုံမက ပါးစပ်ထဲမှ သွေးအန်သည်အထိ ရိုက်နှက်ကန် ကျောက်ခြင်းခံရကာ ကြက်ခြံကိုပြန်ရောက်သွားပြန်သည်။ကြက်ခြံတွင် နောက်ထပ်တနှစ်ကျော် ကြာရပြန်သည်။နောက်တကြိမ်တော့ ထိုင်းရဲ၏ ကြက်ခြံမှ အောင်မြင်စွာ ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖူးခက်သို့ ရောက်လာသည်။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်ပင် လောကဓံ၏ ထုထောင်းရိုက်ပုတ်မှုကို ခံစားခဲ့ရခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေမည်။ အောင်ချိုသည် ကြက်ဥကိုအမုန်းကြီးမုန်းလေ၏။တခါတရံ ဖူးခက်မှ ကုန်တိုက် ကြီးများတွင်ကျနော်ကြက်ဥဝယ်သည့်အခါ “ ဦးလေးရာ၊ စားစရာ ရှားလွန်းလို့ ကြက်ဥမှ ဝယ်စား ရသလား ” ဟုကျနော့်ကို တအံ့တသြမေးတတ်၏။ထို့အပြင် ကျနော့်မိတ်ဆွေထိုင်းရဲများ ဖုန်းဆက်၍ ကျနော့်ထံမှ အရက်ဘီယာအလှူခံသည့်အခါများတွင် ကျနော်က တောင်းတာ များလွန်းသဖြင့် တလုံးစနှစ်လုံးစလျှော့ရန် ထိုင်းစကားလည်လည်ပတ်ပတ် ပြောတတ်သော အောင်ချို့ကို တယ်လီဖုန်းမှ ပြန်၍ဈေးဆစ်ခိုင်းရသည်။ ကျနော်ထိုင်းဘာသာစကားကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားမလည် သော်ငြား ထိုအခါမျိုးတွင် အောင်ချိုသည် ထိုင်းရဲတို့ကို အလိုကို ဆန့်ကျင် ပြောဆိုလိုခြင်းမရှိကြောင်း သိသိသာသာပျက်နေသော သူ့မျက်နှာ ကိုကြည့်ကာ အကဲခတ်နိုင်လေသည်။သူ ထပ်ချည်းတလဲလဲ တုန့်ပြန်ပြောနေသံကား
“ခပ်ဖုန်” ခပ်ဖုန်” (ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ) ဟူသတည်း။
ရက်စွဲအတိအကျမမှတ်မိသော လွန်ခဲ့သောခြောက်လခန့်က နေ့တနေ့တွင် အိမ်မခန် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် အောင်ချို ကားတိုက်ခံရသည်။လာဝိုင်အရပ်က ကိုချာလီတို့အိမ် အ လှူမှာ ကျနော်မုန့်ဟင်းခါးစားနေရင်း အောင်ချို့သတင်းဖုန်းဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။လုပ်ငန်း ခွင်ရှိရာသို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်အသွား နောက်မှကားက သူ့ကို ဝင်တိုက်သွားသည် ဟု ဆိုပါသည် ။ တိုက်သောကားမှာ မရပ်ပဲထွက်ပြေးသွားပြီး အောင်ချိုမှာဆေးရုံပေါ်တွင် သတိမေ့နေသည်ဆို၏။ကျနော်က စားလက်စမုန့်ဟင်းခါးကို လက်စသတ်၍အောင်ချို ရှိရာ ဆေးရုံ သို့သွားရန်ပြင်ဆင်နေဆဲမှာပင် အောင်ချိုပြန်လာ နေပြီဟု ဖုန်းဝင်လာပြန်ပါ သည် ။ ကျနော့် ဈေးဆိုင်အပေါ်ထပ်က အောင်ချို့အိပ်ခန်းသို့ ကျနော်ရောက်သည့်အခါ အိပ်ရာပေါ်မှာ မှေးနေသော အောင်ချို့ကိုတွေ့ရသည် ။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ လွှင့်စင် ကျသွား ပြီး ကတ္တရာလမ်းမနှင့် ဦးခေါင်းရိုက်မိထားသည်ဟု သူ့ ဘေးမှာထိုင်နေသော သူ့ သူငယ် ချင်းကဆိုပါသည် ။ အမှန်စင်စစ် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာရရှိ သူအား ဆေးရုံတွင်နှစ်ရက်တန်သည် သုံးရက်တန်သည် ခေါင်းမူးနေခြင်း ရှိမရှိ အစာ အန်ခြင်း ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ရသင့်သော် လည်း တာဝန်ကျ ဆရာဝန်က
မြန်မာမှန်း သိသည်နှင့် သတိရလျှင်ရခြင်း ပြန်လွှတ်လိုက် ဟန်တူလေ၏။
အောင်ချိုသည်နောက်နေ့တွင်လည်း ဘာမှစကားမေးမရ၊အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေလေ၏။ သူက ကျနော့်ကို ပြန်၍ “ဦးလေး ကျနော်ဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘာကြောင့်ဦးလေးတို့အခန်း ကို ကျနော်ပြန်ရောက်နေတာလဲဟုသာ ထပ်ချည်းတလဲလဲ မေးရှာသည်။ လေးငါးရက်နေမှ ပုံမှန်အခြေအနေ ပြန်ရောက်သည်။
သူ့ဖြစ်ပုံ နှင့်ပတ်သက်၍အမ်မခန်ဖက်ကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့်အသွား နောက်မှတစုံတခုက သူ့ကို အုန်းကနဲနေ အောင်ဝင်တိုက်လိုက်သည်ဟုသာ ပြောနိုင်တော့သည်။
အောင်ချို့ကို တိုက်သွားသည့်ကားကိုလည်း မစုံစမ်းဖြစ်တော့ပါ။ စုံစမ်းနိုင်သည့်တိုင် ယာဉ် မောင်းလိုင်စင်မရှိဘဲ မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းသည့် အောင်ချိုအဖို့ လျော်ကြေးရရန် အကြောင်းမမြင်ချေ ။ ဖွတ်သည်ထက်ညစ်စရာ ဖြစ်လာပြန်သည်ကား ရှိစုမဲ့စု ငွေဖြင့်ဝယ်ထားသော ဆိုင်ကယ်ကို အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်ရဲက သိမ်းသွားပြန်သဖြင့် ဆိုင်ကယ်ပါဆုံးမည့် အခြေအနေဆိုက်လာခြင်းပင် ။ရဲစခန်းကိုလိုက်လျှင်လည်း ကားတိုက်ခံရသော လူနာအမှုပြန်ပတ်ပေတော့မည်။ ကျနော်အသိမိတ်ဆွေထိုင်းရဲများအကူအညီဖြင့် သူ့ဆိုင်ကယ်ပြန်ရွေးပေးမည့် အကြောင်း အောင်ချို့ကို စကားကမ်းသော်လည်း စကားပြန် မရချေ။ အချိန်မှီပြန်မဆပ်နိုင် မည့်အရေးကို သူတွေးပူပန်ဟန်ရှိလေ၏။
ဤသို့လျှင် ဆယ့်ငါးရက်ခန့် အကြာတွင်မူ အောင်ချိုကိုတိုက်သွားခဲ့သည့် ကားသမားသည် ကျနော့်ဆိုင်သို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာပါတော့သည်။ ရောက်လာရသည့် အကြောင်းကား အောင်ချို့ကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် ကားရှေ့ပိုင်းအတွက် လျော်ကြေး ရလိုမှုတည်း။
ကြားစကသော် ကျနော်နားကိုပင် ကျနော်မယုံနိုင်ချေ။ တခုခုမှားယွင်းနေလေသလော။
လူမှားနေလေသလော။ သေချဂဃနဏ စုံစမ်းသိရှိလာရသည့်အခါ လျော်ကြေးလာ တောင်း ကြောင်းသေချာလေသည်။ထိုင်းကားသမားသည် သူတိုက်ခဲ့သော ဆိုင်ကယ်မောင်းသူမှာ မြန်မာဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းမိသွားဟန်ရှိပါ၏။
အကယ်၍ အောင်ချို့နေရာတွင် ထိုင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါမူ ကားတိုက်ခံရမှုအတွက် သေချာပေါက်လျော်ကြေးရပေလိမ့်မည်။ ယခုမူကား တိုက်သွားသောကားက အတိုက်ခံ ရသော လူနာကို လျော်ကြေးအဖြစ် ထိုင်းဘတ်ရှစ်ထောင်တောင်းနေလေ၏။မြန်မာဖြစ်ရသော ဒုက္ခကားကြီးလေစွ ။
အောင်ချိုကား ထိုင်းဘတ်ရှစ်ထောင်ပေးလျော်နိုင်သော အခြေအနေမရှိလေရာလျော်ကြေး ကို လျော့ပေါ့ပေးပါမည့်အကြောင်း တိုးလျှိုးတောင်းပန်သော်ငြား ကားပိုင်ရှင်မှာတပြား သားမျှမလျော့ဟုဆိုကာ တင်းခံနေလေသည်။ အဖြစ်အပျက်အလုံးစုံကို ကြားနေမြင်နေရသော ကျနော့်မှာ မခံမရပ်နိုင်လွန်းသဖြင့် ကားမောင်းသူနှင့်ကျနော် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန် အောင်ချို့ကိုပြောသော်လည်း “ ဦးလေးဝင်ပါရင် ပိုဆိုးကုန်မယ် ” ဟုဆိုလေသဖြင့် ကျနော့်မှာ ရှေ့မတိုးသာပြန်ချေ ။ နောက်ဆုံးတွင်ကား အောင်ချိုက အမှုဖွင့်လိုလျှင် ဖွင့်စေတော့ ၊ မလျှော်နိုင်ပါဟုတင်းခံလိုက်သဖြင့်
တဖက်မှ အသံတိတ်သွား လေသည်။
နောက်သုံးလခန့်အကြာတွင်မူ အောင်ချိုတယောက် သူ့ဇာတိမော်လမြိုင်သို့ အပြီးပြန် သွားပါလေတော့သည် ။သူပြန်ခါနီးအချိန်၌ “ ဦးလေးရယ်၊ အဖေသေတုန်းကလည်း အလောင်းတောင်မမြင်လိုက်ရပါဘူး၊ အခုလည်း အမေက မမာမကျန်းနဲ့ ၊တခုခုဖြစ်သွား ရင် ကျနော်ဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဗမာပြည်မှာပဲ ရရာအလုပ်လုပ်စားပါတော့မယ်” လေသံ တိုးတိုး ငြိုးငြိုးငယ်ငယ် ပြောသွားခဲ့သည် ။
ကျနော်ရောက်နေသော ဖူးခက်မြို့ကြီးတွင် မြန်မာတို့၏ဘဝသည် လွန်ခဲ့သောအနှစ်လေး ဆယ်ဝန်းကျင်ကသော် ဤသို့မဟုတ်ဟု ဆိုကြပါ၏။
ကျနော့်ထံမှ မြန်မာပစ္စည်းလက္ကားဝယ်နေသူသော ဦးသိန်းအောင်သည် လွန်ခဲ့သောအနှစ် လေးဆယ်ခန့်က ဖူးခက်သို့ရောက်ကာ
ထိုင်းအမျိုးသမီးတဦးနှင့် အကြောင်းပါခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
သူထိုင်းနိုင်ငံရောက်ခဲ့ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ “ ဆရာ၊ ကျနော်က ဆင်ကြယ်တံဆိပ် ဖိနပ်ကို သူများနည်းတူစီးချင်တာနဲ့ ထိုင်းရောက်လာတာပါပဲ ဆင်ကြယ်ဖိနပ်စီးချင်တာကို အိမ်ကဝယ်မပေးတာနဲ့ စိတ်ဆိုးပြီး ထွက်လာလိုက်တာ ထိုင်းကိုရောက်လာတာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ဗမာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်ပိုကောင်းတယ် ဆရာရဲ့။ ငွေရှာရတာလည်း ထိုင်းမှာထက်လွယ်တယ်။ ဗမာငွေတကျပ်ကို ထိုင်းငွေသုံးလေးကျပ်တန်တယ်ဆရာ ။ကျနော်တို့ခေတ်က မြန်မာဆို ထိုင်းအမျိုးသမီး တွေက သိပ်သဘောကျကြတာ ဆရာရဲ့။ထိုင်းတွေဗမာကို အထင်ကြီးနေရတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အခုတော့ ဆရာရယ် ၊ ထိုင်းမှာဗမာ တယောက်သေတာ ခွေးတကောင်သေတာလောက်တောင် အရေးမပါတော့ပါဘူး ”ဟု ဆိုဘူးလေသည်။ နှစ်ပြည်ထောင်အခြေအနေတို့ကား မိုးနှင့်မြေပမာ များစွာခြားနားခဲ့လေပြီ
“ဇာတိမာန်”ဟူသော စကားကိုကြားရုံဖြင့်ပင် လိပ်ပြာနှင့် နှိုင်းယှဉ်အပ်သည့် ကျနော်၏စိတ်ဝိဉာဉ်သည် ငွားငွားစွင့်စွင့် ပွင့်လန်းလျက်ရှိသော ပဒုမ္မာကြာပွင့်ဆီသို့ ခိုဝင်လိုပါလျက် ပန်းမာလ်ကင်းသော၊လူသူကွယ်ရာတောအုပ်တွင်းသို့ ညှိုးငယ်စွာ ပျံသန်းပြေးလွှားပုန်း အောင်းသွားရသော ပျားပိတုန်းပမာ ရှိလေ၏။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:48 AM
Living in the forest peacefully,
leading the holy life,
Partaking food once for the day,
how is the face so pleasant?
Does not grieve the past,
does not think of the future,
Satisfied in the present,
by that the face is pleasant.
SN I P-5
Through virtue they go to heaven.
Through virtue wealth is attained.
Through virtue they go to liberation —
secure happiness, free from all suffering and stress.
Thus we should all purify our virtue.
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:42 AM
အခု သမီးမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းနဲ့ ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေတက်ရဦးမယ်´
`အဲဒါ ခက်တာပဲ .. မင်းတို့ကလေးတွေ ဘာက အရေးကြီးလဲဆိုတာ မခွဲခြားနိုင်သေးဘူး။
ဗမာစကားတတ်ရင် ကမ္ဘာမှာ မင်းသွားချင်တဲ့နိုင်ငံဆီသွားပြီး အလုပ်လုပ်လို့ရပြီ။´
`၀င်ပြီလား သမီး .. ကဲ မင်းဗမာစာ ၊ ဗမာစကားတတ်ပြီဆိုပါတော့ .. ။
မင်း ရန်ကုန်က မာစတာသင်တန်းတွေ တက်ခွင့်ရမယ်။
မင်းဘူးဦးသြဘာသရဲ့ စာကောင်း စာခန့်တွေဖတ်လို့ရမယ်။ ပြီးတော့…´
`ရှိတ်စပီးယားပဲ ကောင်းရဦးမလား ဒယ်ဒီရာ။ ဂျာမန်လူမျိုးအဖေက ဒီလိုပြောတာကို အံ့သြမိပါရဲ့´
`ဘာကွ .. အေး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်ကဆို ငါပြောတာမှားချင်မှားမယ်။ အခုလို အချိန်မှာတော့
နောက်နှစ်ဆန်းမှာထွက်လာမယ့် Window Popa (၀င်းဒိုးပုပ္ပါး) ကို မင်းဘယ်လိုသုံးမလဲ။ ထားပါတော့ .. မင်းက open source တို့ Linux တို့ရဲ့ ဟင်္သာရောင်အပိုင်း(၆) .. ( Hintha Shine Core6)ကိုရော ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ .. ။ အလုပ်လုပ်လို့ မကောင်းတော့တဲ့ Window Vista
နဲ့ နေခဲ့ချင်ရင်တော့ မင်းအမေရိကကိုသွားတော့။
ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှကို မလာနဲ့တော့။
နောက်ပြီး Cell Phone နဲ့ မြေပုံစနစ်တွေမှာဆိုရင် ဗမာစာမတတ်ရင် မင်းသုံးရခက်ပြီ´
။ မင်းပြောတဲ့တံဆိပ်တွေက နည်းပညာပိုင်းမှာ (ဆ.သ.ရ)ကို မမှီတော့ဘူးကွ။ စစ်ကိုင်းမှာ လုပ်သွားတဲ့ (ဆ.သ.ရ) အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကို M.R.T.V ၂၃က တိုက်ရိုက်လွှင့်လို့ ဒယ်ဒီကြည့်လိုက်ရတယ်။ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေပဲသမီး . ။ Nokia ဆိုတာ
ကလေးကစားတာပါကွာ။ ကဲ .. ဒီတော့ သမီးဗမာစာသင်တန်းတက်။ ပြီးရင် နောက်လထဲ ဒယ်ဒီဗမာပြည်သွားရင် လိုက်ခဲ့တော့.. ဟုတ်ပြီလား´
လူစီးလေယာဉ်ကို အဓိကကြည့်ချင်လို့ပါ။ အဲဒီလေယာဉ်က ပြေးလမ်းမလိုဘူး။ ပြီးတော့ မြကျွန်းသာပန်းခြံထဲက ရေအောက်ပြခန်းလုပ်မယ့် စက်ရုပ်အလေးမပြိုင်ပွဲပါ ၀င်ကြည့်မလို့လေ´
`ဟားဟား ငါ့သမီးကလဲ သူ့အမေနဲ့တူလာပြီ။ ကြံဖန်ပူတတ်လာတယ် .. ဒီမယ် ငါ့သမီး. ဗမာပြည်မှာ မရတာမရှိတော့ဘူး။ သမီးဘာစားချင်သလဲ။
အဆူးမပါ အနံ့ကင်းတဲ့ ၂၀၀၄ခုနှစ် စတိုင်ဒူးရင်းသီးလား။
သယ်ယူရ လွယ်ကူတဲ့ လေးထောင့်ပုံကြက်ဆင်ဥလား။ လေဆာနဲ့အရိုးတွေကိုချေပြီး တစ်ကောင်လုံးဝါးစားလို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ ငါးသလောက်ပေါင်းလား။
ဥရောပတွေအတွက် သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ အဖြူရောင်ပုန်းရေကြီးလား။ .. ဒါမှမဟုတ်´
`သမီးမေးခွန်းတွေက နည်းနည်းဘေးရောက်လာပြီ ။ ဗမာပြည်သွားမယ်ဆိုရင် ဒါတွေထည့်စဉ်းစားဖို့ကို မလိုတော့ဘူးလေ။ လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ အောက်ဆီဂျင်စစ်စစ်ပေးထားတဲ့ လေရှုဘူးတွေ ထုတ်ပေးမယ်။
ရာသီဥတုကြောင့်တော့ သမီးမပူရတော့ဘူး။ သမီးသွားမယ့် ဟိုတယ်တိုင်းမှာ သမီးစီးမယ့်ကားတံခါးကိုလာကပ်မယ့် Tube တွေရှိတယ်။ အဲဒီအပေါ် ခြေထောက်ချလိုက်ရုံနဲ့ အလိုအလျောက်ရွေ့လျားသွားပြီး သမီးကို Reception ကိုပို့ပေးလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ ဘာသာစကားအနည်းဆုံး ၅၉၀လောက်ပြောတတ်တဲ့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေ စောင့်နေလိမ့်မယ်.. ။ နောက် ဘာတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဟုတ်လား။
ဗမာနယ်စပ်ကို လေယာဉ်ဖြတ်တာနဲ့ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရပြီး GSM တွေသယ်လာရင်ပြောလို့ရပြီ။ အဲ .. ကိုယ့်ဖုန်းကိုယူလာဖို့ မေ့ရင်လည်း မပူနဲ့။
လေဆိပ်မှာ လက်ကမ်းစာစောင်ဝေသလို GSM တွေဝေနေတဲ့ ချာတိတ်တွေရှိတယ်။ ကြိုက်တဲ့ SIM Card ရွေးယူ။ Hand Set ကတော့ ထုတ်ထားတာ ၂ပတ်ကြာတဲ့ မော်ဒယ်ဆိုရင် အလကားယူလို့ရတယ်လေ။ အများစုကတော့ ဆသရလို့ခေါ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတံဆိပ်တွေပဲ´
from forwarded mail
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:53 AM
“ ဒေသတခုသည် 'ရွာ' ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်၊'တော' ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်၊ 'ချိုင့်ဝှမ်း' ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်၊ ' ကြည်းကုန်း'ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သူတော်စင်များနေထိုင်ရာဖြစ်ရိုးမှန်ပါက ထိုဒေသသည် ကမ္ဘာ့မြေပြင်တွင် ပျော်မွေ့ဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်၏”
(ဓမ္မပဒ ဂါထာ အပိုဒ် - ၉၈)
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ အငြိမ်းချမ်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း (The Australian Newspaper)
သြစတြေးလျှ သတင်းစာကြီးမှ Global Peace Index(http://visionofhumanity)
မှထုတ်ပြန်သော နှစ်ပတ်လည်စစ်တမ်းအား ကိုးကား၍ ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၄ နိုင်ငံတို့၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူစသည့် အခြေအနေ များအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်မှုအရ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ နေချင်စဖွယ် အငြိမ်းချမ်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း
အဆိုပါ သတင်းစာကြီး၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
သြစတြေးလျှနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ အဆင့်(၁၉) ရှိပြီး၊
ဇွစ်ဆာလန်နိုင်ငသည် အဆင့်(၁၈)နှင့် ချီလီနိုင်ငံသည် အဆင့်(၂၀) ရှိပြီး
လွန်ခဲ့သောနှစ်ကထက် အဆင့် (၈)ဆင့် တိုးတတ်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
အလွန်နည်းပါးအောင်ဆောင်၇ွက်နိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံ၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်
လျော့ချသုံးစွဲခြင်းတို့အား လက်ရှိ ကွန်ဆာဗေးတစ်ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရမှ
ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် တိုင်းပြည်သည်
အလယ်အလတ်လက်ယာ အမျိုးသားပါတီသည် ပါလီမန်အတွင်း လူကြိုက်များပြီး
ပါလီမန်အတွင်းလည်း အင်အာကောင်းမွန်လာခဲ့အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ငခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ် Mr. John Key မှ သူ၏အတွေးနှင့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို
ကီဝီသတ္တါပုံလေးအားနိုင်ငံတော်တံဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုသော နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၌ ရာဇ၀တ်မှု၊ လူသတ်မှုနှင့် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖေါက်ခံရမှုများ ကင်းရှင်းသော
ယခင်က အိုင်စလန်နိုင်ငံမှ ဦးဆောင်နေခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သော စက်တင်ဘာလမှစ၍ စီးပွါးရေးကျဆင်းမှုနှင့် ဘဏ်များပြိုကျမှုတို့ကြောင့် နိုင်ငံအ၀န်း ဆန္ဒပြမှုများ၊
အဓိကရုန်းများ သွေးထွက်သုံယိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောကြောင့် နယူးဇီလန်သည်
ကမ္ဘာ့အဆင့် (၄)မှ အဆင့် (၁) အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နော့်ဒစ်(Nordics) နိုင်ငံများဖြစ်ကြသော ဒိန်းမက်သည် ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ၊ နော်ဝေးသည် တတိယနှင့်
အိုင်စလန်သည် စတုတ္ထအဆင့် နှင့် သြစတီးယားနှင့် ဆွီဒင်တို့သည့် ပဉ္စမနှင့်
ဆဌမနေရာအဆင့် စသည်ဖြင့် အသီးသီးရှိကြပါသည်။
နယူးဇီလန် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခများလေ့လာရေးအမျိုးသားဌာနကြီးမှ
ဒါရိုက်တာ ( Professor Kevin Clements က
“ ဒါဟာ တိုင်းပြည်တွင်းနေထိုင်ကြသော ပြည်သူလူထုတွေရဲ့
အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့စရိုက် လက္ခဏာတွေကို ညွှန်ပြနေတဲ့ သဘောပါဘဲ” လို့
“ ခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့မှာပါ ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအရဆို ကမ္ဘာ့ အငြိမ်းချန်းဆုံး နိုင်ငံပေါင်း (၂၀)
ကိုကြည့်ရင် နိုင်ငံငယ်လေးချည်းပါဘဲဗျာ.. သို့ပေမယ့် သူတို့မှာ ချစားမှု၊
ပြည်သူ့ဘ၀လုံခြုံရေး၊ လူမှု့ဖူလှုံရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး အတွက်
အလွန်ခိုင်မာတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အပေါ်အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်”
လို့ Professor Kevin Clements ကဆိုပါသည်။
Global Peace Index စစ်တမ်းအရ ဂျပန်နိုင်ငံသည် အဆင့်(၇)၌ တွေ့ရပြီး
မနှစ်ကထက် (၂) ဆင့်လျော့ကျသွားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ကနေဒါသည် အဆင့် (၈)၊ ဂျာမဏီ အဆင့်(၁၆)၊ ပြင်သစ် အဆင့် (၃၀)၊ အီတလီ အဆင့်(၃၆)၊ ဗြိတိန်မှာ အဆင့် (၃၅) ရှိပြီး ယခင်နှစ်ကထက် အဆင့် (၁၄)ဆင့်တိုးတတ်လာကြောင်းတွေ့ရပြီး၊
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် အဆင့် (၈၃) ရှိပြီး ယခင်နှစ်ကထက်
အဆင့်(၁၃) ဆင့်တိုးတတ်လာကြောင်း Global Peace Index စစ်တမ်း၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကတော့ မနှစ်ကနှင့်အတူတူ အဆင့် (၁၂၆) ၌ ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
အီရက်နိုင်ငံကတော့ သုံးနှစ်တာကလအတွင်း နိုင်ငံအတွင်း၌
သွေးထွက်သံယိုမှုများအပြည့်နှင့် ပြည်သူ့ဘ၀ လုံခြုံမှု မရှိသောကြောင့်
`၎င်းမှစတင်ရေတွက်သော် အာဖဂန်နစ္စတန်(၁၄၃)၊ ဆိုမာလီယာ (၁၄၂)၊
အစ္စရေး(၁၄၁)၊ ဆူဒန်(၁၄၀)၊ ကွန်ဂို(၁၃၉)၊ ချဒ်(၁၃၈)၊ ပါကစ္စတန်(၁၃၇)၊
ရုရှား(၁၃၆)၊ ဇင်ဘာဘွေ (၁၃၅) စသည့်နိုင်ငံများသည်
ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုကင်းမဲ့နေသော နိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း Global Peace Index
လေ့လာဆန်း စစ်ချက်များက ညွှန်းဆိုနေပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
“ဒီလိုဆိုရင် တတိယဆန်ကာနဲ့ ပြန်စစ်ကြည့်...
ငါ့ကို အရမ်းပြောပြချင်နေတဲ့ သတင်းက အရေးကြီးတဲ့ သတင်း လား”
သတင်းမှန် ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလဲ မသိဘဲနဲ့ ဘာလို့ ပြောပြချင်ရတာလဲ... ပြောပြန်ရင်လဲ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ် တာပဲ အဖတ်တင်မယ်။
မဟုတ်မမှန်ပြောတတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ စကားကို မယုံနဲ့
ဖြားယောင်းသွေးဆောင် သူတွေရဲ့ စကားတွေ နားထဲ မ၀င်စေနဲ့။
သူတို့ဟာ စေတနာပါလို့ ပြောတာထက် သူတစ်ပါးကို ချောက်တွန်းဖို့က များတယ်။
အဲဒီလို လူမျိုးနဲ့ပေါင်းရင် တစ်နေ့ကိုယ်လည်း ချောက်တွန်းခံရတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပြောမယ့် စကားကို ဆန်ကာသုံးခုနဲ့ အရင်စစ်ဆေးသင့်တယ်”
အတင်းဆိုတာ ထက်မြက်တဲ့ ဓားသွားထက် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။
လူတစ်ယောက် ကို ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် မမြင်စေဘဲ ထိခိုက်နိုင်တယ်။
တစ်ခြားလူ ထိခိုက်မှ ရလာမယ့် ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို တစ်ချို့က နှစ်သက် တတ်ကြ တယ်။
စကားကို လူတိုင်းပြောတတ် တယ်။ ဒါပေမယ့် စကားကောင်း တွေကို လူတိုင်း မပြောတတ်ကြဘူး။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:38 AM
မေလ ၅ ရက်နေ့က မမျှော်လင့်ဘဲ ဆေးရုံတစ်ရက်တက်လိုက်ရပါတယ်။ ရင်ဘတ်ရုတ်တရက်အောင့်လာလို့ ဆရာဝန်က စိတ်ချရအောင်
ဆေးရုံမှာ ခဏနေပါဆိုလို့ နေရတာပါ။
အဲဒီဆေးရုံတစ်ညမှာ သေခြင်းတရားကို ဆင်ခြင်ကြည့်မိတယ်။
ကျွန်တော့်အသက် ၄၇ နှစ်ပြည့်ခါနီးပြီ။ အခုလည်း သေနိုင်တယ်။
နောက်ထပ်နေရလှ အခုအသက်ရဲ့ တစ်ဝက်ဆိုရင်လည်း ကံကောင်းလှပြီ။ပြီးတော့ ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ လက်ရှိဘ၀အ ခြေအနေက ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ကျေနပ်စရာပါပဲ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃၀၊ နှစ် ၂၀ က ရည်မှန်းခဲ့တာတွေနဲ့ နှိုင်းရင် တင်းတိမ်ကျေနပ်သင့်ပြီ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် ကျွန်တော်မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့အခါ ကျွန်တော်မသေချင်သေးဘူး။ ကျွန်တော်မက်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်တွေ အပြင်ဘ၀မှာ မြင်ခဲ့ချင်သေးတယ်။
ကျွန်တော့်အတွက်ထက် နောက်မျိုးဆက်တွေ အိပ်မက်လှလှမက်နိုင်ဖို့အတွက်
ကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းမှာ အခင်ဆုံးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းအတော်များများက ဒီနိုင်ငံမှာ မရှိကြပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်ကတည်းက ရေကြည်ရာမြက်နုရာ၊ ဘ၀ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ၊
ခံစားမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ရောက်နေကြတာပါ။
အစပိုင်းမှာ တော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အသက်ကြီးလို့ အနားယူခါနီးရင်၊ သားသမီး တွေကြီးရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ၅၀ ကျော်ရင် ပြန်ပြီးအခြေချကြဖို့၊ ဆုံကြဖို့ စကားတွေရှိပါတယ်။ အခုနှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်အတွင်း သူတို့နေတဲ့ ပထမကမ္ဘာကနေ တတိယကမ္ဘာကို ခဏ အလည်လာကြတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အရင်ပြောဖူးတဲ့စကားကို ပြန်မေးဖို့ ကျွန်တော်တွန့်ဆုတ်နေမိတဲ့အထိ သူတို့အဖြေတွေကို မျက်ဝန်းမှာမြင်နေရပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ၇၀၊ ၈၀ ကျော် မိအိုဖအိုတွေအတွက် စိတ်မဖြောင့်တောင်မှ ပြန်မလာတော့ဘူး။ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဘ၀တွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ တချို့ မိဘတွေဆိုရင် သူတို့သားသမီးတွေဆီလည်း လိုက်မနေနိုင်၊ ဒီမှာလည်း သားသမီးတွေတစ်ဦးမှမရှိတော့။ သူတို့သားသမီး၊ မြေးမြစ်တွေရဲ့ ပစ္စပ္ပုန်၊ အနာဂတ်တွေ လှပနေတယ်ဆိုတာ မှန်းဆမြင်ယောင်မှုနဲ့ ဘ၀ကို အသက်ဆက်နေကြတယ်။
သူတို့ရဲ့ အတိတ်၊ ပစ္စပ္ပုန်ကို ကျေနပ်နေကြရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်တုန်းက စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းကို နှစ်ပတ်လောက် ခရီးထွက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် နေရာစုံတော်တော်များများ ရောက်ခဲ့တယ်။ အရင်ကလည်း ရောက်ဖူးနေကျဖြစ်ပေမဲ့ ဒီတစ်ခေါက် ပိုအံ့သြစရာဖြစ်လာတာက ရောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ မြန်မာလူငယ်လူရွယ်လေးတွေ အများကြီးတွေ့ရတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် စားသောက်ဆိုင်လို နေရာမျိုးမှာပါ။ မြို့ကြီးပြကြီးနေရာမှာ သာမက မြို့ငယ်လေးတွေမှာလည်း မြန်မာတွေကို တွေ့ရတော့ မြန်မာတွေ ပိုပိုများလာတာပါပဲ။ စင်ကာပူမှာတော့ မြန်မာစကားသံမကြားရတဲ့ နေရာမရှိသလောက်ပါပဲ။ တချို့က မြန်မာအချင်းချင်း ၀မ်းပန်းတသာ နှုတ်ဆက်ကြသလို၊ တချို့က မ၀ံ့မရဲပါပဲ။ ညှိုးငယ်တဲ့မျက်ဝန်း၊ မ၀ံ့မရဲတဲ့ ဟန်အမူအယာ ဒီလိုတွေမြင်ရတာ များရပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမှ မဟုတ်ဘဲကိုး။ ဟိုချင်းမိုင်မြို့က အရမ်းဝေးတဲ့ National Park လို နေရာမျိုးမှာတောင် မြန်မာကရင်တွေ အများကြီးတွေ့ရတော့ တို့တိုင်းပြည်မှာတောင် လူကျန်သေးရဲ့လား ထင်မှတ်မှားတဲ့အထိပါပဲ။ ပြေလည်ပြီး အဆင့်မြင့်မားတဲ့ နေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းမှီတဲ့လူအချို့ တွေ့ရပေမဲ့ အများစုကတော့ ရုန်းကန်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ 3Ds ဆိုတဲ့ သူများမလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကို အရင်က ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာပဲ လုပ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှာ မြန်မာတွေများများ လုပ်လာနေတာပါပဲ။ အရင်တုန်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်တို့ နေရာမှာ မြန်မာတွေ အစားထိုးလာနေတဲ့ပုံပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်ဘ၀က အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖြေရှာမရတဲ့အခါ ဖြစ်ရတဲ့ခံစားမှုမျိုး လူငယ်အများစုဟာ ထွက်ပေါက်ရှာပြီး နိုင်ငံခြားထွက်လာကြတာလားလို့ တွေးမိတဲ့အခါ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ ၀န်းကျင်၊ အနာဂတ်တွေ မရှိဘူး၊ ရှိမလာနိုင်ဘူးလို့ ယူဆမိနေကြသလားလို့ တွေးမိပါတယ်။
မကြာခင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ မဲဆွယ်ကြတော့မယ်။ ဘယ်ပါတီကို မဲထည့်မလဲ။ သူတို့ပြန်လာနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုး၊ ကြည်လင်ရှင်းသန့်တဲ့ ကောင်းကင်ရဲ့အောက်မှာ အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်မက်လို့ရတဲ့ အခြေအနေတွေ၊
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ရင် သူတို့တွေ ပြန်လာလိမ့်မယ်။
ဒီအခြေအနေမျိုး ဖန်တီးပေးဖို့ အာမခံတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကို မဲထည့်မယ်။
ကျွန်တော် မသေချင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်နိုင်ငံ၊ ကျွန်တော့်လူမျိုး၊ ကျွန်တော့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေကို လက်တွေ့မြင်ချင်သေးတယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဝေစည်မယ့် မိသားစုစုံညီထမင်းဝိုင်းတွေကို မြင်ယောင်ချင်သေးတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့...
အိုရနာရ၊ သေရဦးမည် မှန်ပေသည်တည့်။
ဆရာရဲ့ ကဗျာတွေဖော်ပြခဲ့တဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းရဲ့အယ်ဒီတာက
အသက် ၂၀ပဲ ရှိသေးတဲ့ ကိုအောင်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။)
သားသမီးများ၏ အိမ်အပြန်ကို စောင့်မျှော်နေကြသော မိဘများအား စာနာမှုနှလုံးသားဖြင့် ဤစာကို ရေးသားပါသည်။ ။ စာရေးသူ
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:36 AM
Anguttara Nikaya: II, 32
Posted by Dr. Ashin Indaka at 12:23 PM
၁။ ငယ်ခါကလျင် မသင်ပညာ
၃။ သူ့ ကိုချစ်ဖျက်
၄။ သူ့ သက်သတ်စား
၆။ ပစ္စည်းရှိလျက် စိုးစိ မလှူ
၉။ ပညာရှိထံ နည်းခံ မမှတ်
Posted by Dr. Ashin Indaka at 10:59 AM
(အရှင် ဇနကာဘိဝံသ၊ ရုပ်စုံ ဗုဒ္ဓ၀င် အမေးအဖြေ နှာ-၂၆)
ငါးရာ့ငါးဆယ် သရဘင်္ဂဇာတ်မှာ မင်းသုံးပါးနဲ့ သိကြားမင်းတို့ ဘုရားအလောင်း သရဘင်္ဂ ရသေ့ဆီ
ရောက်လာပြီး သိကြားမင်းက မေးခွန်းပြဿနာ မေးပါတယ်။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 10:11 AM
If you want to find Dhamma, it has nothing to do with the forests or the mountains or the caves. It's only in the heart. It has its own language of experience. There isagreat difference between concepts and direct experience. Withaglass of hot water, whoever put his finger into it will have the same experience -hot- which can be called by many words in different languages.
Similarly, whoever looks deeply into the heart will have the same experience, no matter what his nationality, culture, or language may be. If in your heart you come to that taste of truth, of Dhamma, then you become like one big family - like mother and father, sisters and brothers - because you've tasted that essence of the heart which is the same for all.
From A Tree In A Forest by Luang Por Chah
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:02 AM
ပညာအရင်းအမြစ်၊ ပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စသည်ဖြင့် ပညာခေတ်မှာ ပညာကိုရှေ့တန်းတင်လာကြသည်။ အရင်းအမြစ်အနေနှင့် ကြည့်လျှင်လည်း ပညာအရင်းအမြစ် အရေးပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနေနှင့်ကြည့်လျှင်လည်း ပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပဓာနကျသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ ပညာကိုသယံဇာတဟု တင်စားပြောချင်သည်။'
သဘာဝသယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသည့် နိုင်ငံတွေဟာ
ကျိန်စာသင့်သော နိုင်ငံတွေပဲ'ဟု တစ်နေရာမှာ ဖတ်မိဖူးသည်။
အာဖရိကမှာ စိန်တွင်းတွေ ဖင်ခုထိုင်ထားပြီး ငတ်ပြတ်နေသော နိုင်ငံတွေရှိသည်။
အာရှမှာလည်း တစ်ချိန်က သယံဇာတ ပေါကြွယ်လှပါသည်ဟု ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခဲ့သည့်
နိုင်ငံတွေ ယခုဓားမနောက်ပိတ်ခွေး ဖြစ်နေကြသည်မှာ အထင်အရှားပင်။
ဘာသယံဇာတမျှမရှိသော ဂျပန်တို့၊ စင်ကာပူတို့က ရှေ့တန်းရောက်နေ ကြသည်။
သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ သဘာဝသယံဇာတ ပြောပလောက်အောင် မယ်မယ်ရရဘာတစ်ခုမျှမရှိ။
သို့ဖြစ်လျှင် သူတို့မည်သည့်နည်းနှင့် ရှေ့တန်းရောက်နေကြသနည်း။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းက အာရပ်နိုင်ငံတွေ ရေနံသယံဇာတဖြင့်ကြွယ်ဝ နေသည်မှာမှန်ပါသည်။
သို့သော် နောက်နှစ်သုံးလေးဆယ်ဆိုလျှင် ထိုရေနံတွေ လုံးဝခန်းခြောက်တော့မည်ဟု
ထို့ကြောင့် သဘာဝသယံဇာတသည် ထာဝရမှီခိုဖက်တွယ်အားကိုးသင့်သော အရာမဟုတ်။ သဘာဝသယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသည့်နိုင်ငံသည်
ပညာသယံဇာတနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအား မကိုးဘဲ သဘာဝသယံဇာတအပေါ် အလွန်အကျွံမှီခိုခြင်းသည် လူအညွန့်တုံးသလို အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တို့ကို လည်း အညွန့်ချိုးရာရောက်မရောက် စဉ်းစားသင့်သည်။
ယနေ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံကြီးတိုင်းကိုကြည့်က ပညာအရင်းအမြစ်၊ ပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊
ပညာ သယံဇာတအပေါ် အဓိကမှီခို တည်ဆောက်ထားသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် ပညာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ၊ ပညာအရင်းအမြစ် တည်ဆောက်ပါ၊ ပညာသယံဇာတ ကြွယ်ဝအောင်လုပ်ပါဟု ပညာရှင်တွေက တတွတ်တွတ် ပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပညာဟူသည် ပါဠိဝေါဟာရက ဆင်းသက်လာသည်။
ပ-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ညာ-သိခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ထွက်သည်။
ပညာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာအဘိဓာန်က 'ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောဉာဏ်၊ အတတ်'ဟုဖွင့်သည်။
တိပိဋကပါဠိမြန်မာအဘိဓာန် က 'အထူးထူးအပြားပြားအားဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားဆင်ခြင် သိမြင်တတ်သော သဘောတရား၊ အသိ၊ အလိမ္မာ၊ ဉာဏ်၊ ပညာ'ဟုဖွင့်သည်။ ပါဠိသက်ဝေါဟာရအဘိဓာန်က 'အသိဉာဏ်၊ အပြားအားဖြင့် သိတတ်သောဉာဏ်၊ ဆည်းပူးရသော အသိဉာဏ်၊ အသိဉာဏ်ကိုရရာရကြောင်း ရှာဖွေဆည်းပူးအပ်သော အတတ်' ဟုဖွင့်သည်။
မြန်မာအဘိဓာန်၏အဖွင့်က အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ပညာနှစ်ခုကိုဖွင့်သည်။ တိပိဋကပါဠိမြန်မာအဘိဓာန်က အသိပညာကိုသာ ဦးစားပေးဖွင့်သည်။
ပါဠိသက်ဝေါဟာရ အဘိဓာန်ဖွင့်ပုံက အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ပညာနှစ်ပါးလုံးကိုဖွင့်သော်လည်း အတတ်ပညာသည် အသိပညာရခြင်းအကြောင်း၊ အတတ်ပညာမှနေ အသိပညာဖြစ်ပေါ်ရကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင် ဖွင့်သည်။ ထိုသို့ထူးသည်။
ဉာဏ်ပညာဟုတွဲ၍သုံးသည့်အတိုင်း ဉာဏ်နှင့် ပညာသိခြင်း အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် အတူတူပင်ဖြစ်၏။ ဝေါဟာရသာကွဲ၏။၊ ထိုပညာသည် ကမ္မဿကတာပညာ၊ သစ္စာနုလောမိကပညာ ဟု နှစ်မျိုးရှိ၏။ အကုသိုလ်ကံသည် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဟုတ်၊ ကုသိုလ်ကံသည်သာ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟု ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်မှုကို 'ကမ္မဿကတာ ပညာ' ဟုခေါ်၏။ ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရတွေဟာ အနိစ္စ ၊ဒုက္ခ၊ အနတ္တတွေချည်း ပါပဲလားဟု ပိုင်းခြားရှုမြင်မှုကို 'သစ္စာ နုလောမိကပညာ' ဟုခေါ်၏။
၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်၌ သုတမယပညာ၊ စိန္တာမယပညာ၊ ဘာဝနာမယပညာဟု ပညာသုံးမျိုးဟောထား၏။ ကြားဖူးနာဖူး ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးလို့သိသော ပညာသည် သုတမယပညာ ဖြစ်၏။
ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် စဉ်းစားဝေဖန်၍ သိသောပညာသည် စိန္တာမယပညာ ဖြစ်၏။
ပွားများအားထုတ်၍ သိသောပညာသည် ဘာဝနာမယပညာ ဖြစ်၏။
အဘိဓမ္မာသဘောအရ ပညာအစစ်သည် ကုသိုလ်စိတ်နှင့် ယှဉ်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ရ၏။ လောကအတတ်ပညာတို့သည် ထိုပညာတို့နှင့်စပ်၍ အများအပေါ် စိတ်ကောင်းစေတနာ ကောင်းထားလျှင် ပညာဖြစ်နိုင်၏။ စိတ်ယုတ်မာတွေထားလျှင် ပညာမဟုတ်တော့။ မာယာသာဖြစ်တော့၏။
မည်သည့် အတတ်ပညာမဆို ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှ ပညာဖြစ်၏။
အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လျင် ပညာမဖြစ်နိုင်၊ မာယာ ဖြစ်ဖို့များ၏။
ပညာရှိဖို့၊ ဉာဏ်ကောင်းဖို့ အကြောင်းငါးချက်ရှိ၏။
အတိတ်ဘ၀က ဉာဏ်ပညာကို ဖြစ်စေနိုင်သော ကောင်းမှုကံပါရှိရ၏။
ဒေါသဗျာပါဒကင်းသော ဗြဟ္မာ့ပြည်၌ဖြစ်ရ၏။ အသိပညာရင့်ကျက်ရ၏။
ကိလေသာ တွေဝေးကွာ၍ ကိလေသာနည်း သူဖြစ်ရ၏။
ပညာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့၍ ပညာပါရမီရှိသူတို့သည် ပညာရှိကြ၊ ဉာဏ်ကောင်းကြ၏။
ဒေါသဗျာပါဒ ကင်းသူတို့သည် ပညာရှိကြ၏။ ဉာဏ်ကောင်းကြ၏။
အသိပညာရင့်ကျက်သူတို့သည် ပညာရှိကြ၏။ ဉာဏ်ကောင်းကြ၏။ ကိလောဘ နည်းပါးသူတို့သည် ပညာရှိကြ၏။ ဉာဏ်ကောင်းကြ၏။ ဇာတိပညာပါသူတို့သည် ပညာရှိကြ၏။ ဉာဏ်ကောင်းကြ၏။
ဣတိဝုတ်ပါဠိတော် အန္ဓကရဏသုတ်၌ ပညာရှိကြောင်း၊ ဥာဏ်ကောင်းကြောင်းတို့ကို ဟောထားတော်မူ၏။ ''ကုသိုလ်ဝိတက်သုံးမျိုးက ဉာဏ်မျက်လုံးကြည်လင်ပြီး အမြင်စူးရှအောင် လုပ်ပေးတတ်တယ်။ ဉာဏ်မျက်လုံးအားကောင်းပြီး အမြင်သန် အောင် လုပ်ပေးတတ်တယ်။ ဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးပွားအောင် လုပ်ပေးတတ်တယ်။ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ကုသိုလ်ဝိတက် သုံးမျိုးဆိုတာ နေက္ခမ္မ၀ိတက်၊ အဗျာပါဒ၀ိတက်၊အ၀ိဟိံသာဝိတက်တို့ပဲ''။
နေက္ခမ္မ၀ိတက်ဟူသည် အကုသိုလ်တွေကလွတ်နေပြီး ကုသိုလ်တွေကို တွေးတောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားအာရုံပြု၊ တရားအာရုံပြု၊ သံဃာအာရုံပြု၊ ကုသိုလ်ကိစ္စအာရုံပြု၊ အများကောင်းကျိုးတွေးဆိုလျှင် နေက္ခမ္မ၀ိတက်ဖြစ်သည်။ ပရဟိတ ၀ိတက်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
အဗျာပါဒ၀ိတက်က မေတ္တာနှင့်တွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အ၀ိဟိံသာဝိတက်က ကရုဏာနှင့် တွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကုသိုလ်ဝိတက်သုံးမျိုးကို တွေးပေးလျင် ပညာရှိမည်။ ဉာဏ်ကောင်းမည်။ သံယုတ်ပါဠိတော်၊ သုတ္တနိပါတ် ပါဠိတော်တို့၌လည်း ပညာရှိကြောင်း ဉာဏ်ကောင်းကြောင်းတို့ကို ဘုရားရှင်ဟောထားခဲ့သည်။ သူတော်ကောင်း တရားကို မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားရှိရမည်။
ပညာရှိထံ ဆည်းကပ်နာခံမှတ်သားခြင်း ရှိရမည်။ မမေ့မလျော့သော သတိတရားရှိရမည်။ စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုရှိရမည်။ ထိုလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံလျင် ပညာရှိမည်။ ဉာဏ်ကောင်းမည်။
အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် ပညာ ၀ုဒ္ဓိသုတ်၌ ပညာတိုးကြောင်း၊ ဉာဏ်ကောင်းကြောင်းတို့ကို ဘုရားမိန့်ခဲ့သည်။ သူတော်ကောင်းနှင့်ပေါင်းသင်းရမည်။ သူတော်ကောင်းတရား နာကြားရမည်။ နာခံရမည်။ မှန်ရမည်။ နှလုံးသွင်းမှုမှန်ရမည်။ တရားကျင့်ရမည်။ သမာဓိအလုပ်ကိုလုပ်ရမည်။
အဋ္ဌင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်၌ ပညာဉာဏ်တိုးပွားကြောင်း အကျင့်ကောင်းရှစ်ပါး ဘုရားဟောထားခဲ့သည်။ ဆရာသမားအပေါ် လေးစားရမည့် အပေါင်းအသင်းတွေအပေါ် ရှက်တတ်၊ ကြောက်တတ်ရမည်။ ချစ်ခင်လေးစားမှုရှိရမည်။ မကြာခဏ ချဉ်းကပ်ပြီး အကြောင်းအကျိုး မေးမြန်းဆွေးနွေးရမည်။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေတတ်ရမည်။ကိုယ်ကျင့်သီလရှိရမည်။ဗဟုသုတရှိရမည်။ အစအလယ်အဆုံး ကောင်းခြင်းသုံးပါးပြည့်စုံသော စာပေကို သင်အံဖတ်ကြားမှတ်သားရမည်။ အကုသိုလ်တရားတွေပယ်ဖို့ ကုသိုလ်တရားတွေ တိုးပွားဖို့ကြိုးစားရမည်။ အကျိုးမရှိသော စကားမပြောဘဲ အကျိုးရှိသော စကားပြောရမည်။ ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပျက်ကို အဖန်ဖန် ရှုမှတ်ရမည်။
သမ္မောဟ၀ိနောဒနီအဋ္ဌကထာ၌ ပညာရှိကြောင်း၊ ဉာဏ်ကောင်းကြောင်းတို့ကို ပြဆိုထားသည်။ လူကြီးသူမဆရာသမားများထံ ချဉ်းကပ်ပြီး အဖန်ဖန်မေးရမည်။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး အထူးဂရုပြုရမည်။ သဒ္ဓါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဣနြေ္ဒငါးပါးမယုတ်မလွန်ညီမျှအောင် ကျင့်သုံးရမည်။ အသိဉာဏ်ပညာ မရှိသူတို့ကို ဝေးဝေးရှောင်ရမည်။ အသိဉာဏ်ပညာရှိသူတို့ကို မှီဝဲပေါင်းသင်းရမည်။ ဉာဏ်၏ကျက်စားရာ နက်နဲသော တရားသဘောတို့ကို ဆင်ခြင် သုံးသပ်ရမည်။ဣရိယာပုထ်လေးပါး အသိပညာရရှိရေးသာ စိတ်ညွတ်နေရမည်။
မိလိန္ဒပဥှာပါဠိတော်၌ ပညာရှိကြောင်း၊ ဉာဏ်ကောင်းကြောင်းတို့ကို ပြဆိုထားသည်။
အသက်အရွယ်ကြီး ရင့်ရမည်။ အခြံအရံ အကျော်အဇောများရမည်။ အဖန်ဖန်မေးရမည်။
ရေဆိပ်ပမာ ဆရာနှင့်ပေါင်းဖော်ရမည်။ သင့်လျော်သော နှလုံးသွင်းရှိရမည်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမည်။ အစေးကူးသူနှင့် နေထိုင်ပေါင်းသင်းရမည်။ သင့်လျော်ရာအရပ်၌ နေရမည်။
ပညာအရင်းအမြစ်၊ ပညာအရင်းအနှီး၊ ပညာသယံဇာတ အရေးကြီးသည်။
စိတ္တေနနိယျတေလောကော- တစ်လောကလုံးကို စိတ်ကဦးဆောင်သည်ဟု ဘုရားဟောသော်လည်း ထိုစိတ်ကို ပညာနှင့်ထိန်းကွပ်၊ ပညာ နှင့်ထိန်းကျောင်းပေးရမည်။
ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ကို သိနိုင်မြင်နိုင်ဖို့ မဂ်ပညာ ဖိုလ်ပညာ လိုအပ်သလို လောကနိဗ္ဗာန် ကို သိနိုင်မြင်နိုင် ရရှိနိုင်ဖို့ ခေတ်ပညာတွေ လိုအပ်တာကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:05 AM
Success is not permanent & Failure is not final!
So, Never stop working after success &
Never stop trying after failure!.......
With that note lets all begin our day…….
"Past is Experience...!
Present is Experiments...!!
Future is Expectations...!!!
Use your Experience in your Experiments to achieve your Expectations...!!!!"
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:04 AM
နိုင်ငံခြားမှာနေတာ အတော်ကြာပြီလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ် ပညာသင်ကြားရေးကိစ္စနဲ့
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်က ထွက်ဖြစ်တယ်။ ပညာသင်ကြားရင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာရေး အခြေအနေကို လေ့လာခဲ့တယ်။
နံပါတ် (၁) လေ့လာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချက်က
ကိုယ့်ဘာသာအကြောင်းကို ကောင်းကောင်း ရှင်းပြနိုင်တယ်။ အခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့တွေ့ရင်လည်း ကောင်းကောင်းစည်းရုံးနိုင်တယ်။
ဘာလို့ ဒီလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း သိနေရတာလဲ။
သူတို့နိုင်ငံမှာ Sunday Dhamma School တွေရှိတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် (၇) နာရီလောက်ဆိုရင် အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေ ပန်းစည်းလေးတွေ ကိုယ်စီစွဲကာ ကျောင်းကို ရောက်လာကြပြီ။ အရွယ်စုံပဲ။ အချိန်ကြတော့ ဆရာတော့်ထံမှာ သီလယူကြတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ့်စာသင်ခန်းအသီးသီးကို သွားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာသင်္ခန်းစာတွေ သင်ရတယ်။
စုံစမ်းလို့ သိရတာက ''အစိုးရတန်းကျောင်းတွေမှာ တက်နေတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတိုင်း တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာသင်္ခန်းစာတွေကို မသင်မနေရ သင်ရတယ်၊ ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သင်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသင်္ခန်းစာတွေကလည်း သူတို့အတန်းအသီးသီးအတွက် Subject တစ်ခုဖြစ်တယ်" စသဖြင့် ဆရာတော်က ရှင်းပြတယ်။
နောက်နံပါတ် (၂)ု သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာနေစဉ် လေ့လာဖြစ်တာက
အင်္ဂလိပ်စာ။ မြန်မာပြည်မှာ တချိန်က အင်္ဂလိပ်စာမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့
စိန်ပေါလ်လိုကျောင်းမျိုးတွေ သူတို့နိုင်ငံမှာ ရှင်သန်နေတုန်းပဲ။
အဲ့လိုကျောင်းမျိုးထဲက Aquinas College ဆိုတဲ့ ကျောင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဈေးလည်းသက်သာ သွားရေးလာရေးလည်း လွယ်ကူ အဆင့်လည်းမှီတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းပဲ။ အင်္ဂလိပ်စာကို အဓိကထား သင်ကြားပေးပြီး
ကွန်ပြူတာပညာရပ် များကိုလည်း သင်ကြားပေးတယ်။
အုပ်ချုပ်တဲ့သူက ခရစ်ယာန် father ကြီးတွေ။
ဒီအချက် (၂) ချက်ကို လေ့လာပြီး
''ဒို့နိုင်ငံ ဒို့လူမျိုးအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းကိုလည်း သိအောင်
အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မရှက်မကြောက် ပြောတတ်လာအောင် ကျောင်းတစ်ကျောင်း တည်ထောင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းအရာတွေကို
အင်္ဂလိပ်လို သင်ပေးရရင် ကောင်းမှာပဲ'' လို့ အကြံရလာတယ်။
ခရစ်ယာန် father ကြီးတွေ သူတို့ရဲ့ကျောင်းတွေမှာ
ဦးစီးဦးကိုင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အုပ်ချုပ်သလို
ဒို့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေလည်း ညီညီညာညာအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက်
သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ပြီး အစည်းအဝေး လုပ်ဖြစ်တယ်။
ဦးစီးဦးကိုင်ပြုလုပ်မဲ့ ဆရာတော်ဟာ အနည်းဆုံး ဓမ္မာစရိယအောင်မြင်ပြီး
မဟာဝိဇ္ဇာ (M.A) ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ဖို့ တညီတညွတ် တည်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်တယ်။
(ဓမ္မာစရိယ၊ တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ၊ B.A, M.A, Ph.D)
(တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ၊ B.A,တက္ကသီလမဟာဓမ္မာစရိယ၊ M.A)
(တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ၊ B.A,တက္ကသီလမဟာဓမ္မာစရိယ၊M.A, Ph.D)
(တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ၊ B.A,တက္ကသီလမဟာဓမ္မာစရိယ၊ M.A,Ph.D)
(၅) ဒေါက်တာ အာသဘ
(တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ၊ B.A, M.A, Ph.D)
ဆရာတော်များက ဦးစီးပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကာ သင်တန်းများပို့ချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းတိုက်တည်ထောင်ရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ မြေနေရာ ရရှိဖို့ ပင်။
ဒီအတွက် ဒီနှစ် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) ဖေဖေါ်ဝါရီလတုန်းက
မြန်မာပြည်ပြန်တော့ မြေကွက်တစ်ကွက် အလှူခံရရှိ်ခဲ့တယ်။
ကျောင်းတိုက် တည်ဆောက်ဖို့ လိုသေးတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ကျောင်းတိုက်တည်ဆောက်ဖို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာများနဲ့ တိုင်ပင်တော့ သိန်း ၂၆၀၀ လောက်ကုန်မယ်ခန့်မှန်းတယ်။ ကျောင်းတိုက်မှာ စာသင်ခန်း၊ ကွန်ပျူတာခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ တရားထိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ ဘုရားခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်ခန်း၊ ဆရာတော်များနေခန်း၊ စာသင် ဆရာတော်များ နားနေခန်း။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတို့အတွက် canteen ခေါ် စားသောက်ဆိုင် စသဖြင့် ခေတ်မှီတဲ့ ပညာသင်ဌာန တစ်ခုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အခန်းတွေဖွဲ့စည်းရမှာဆိုတော့
သိန်း ၂၆၀၀ ဧကန်ကုန်မည်ဟု ယူဆမိတယ်။
အဲ့ဒီကုန်ကျမည့်ငွေများကို ပါရမီရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ နောင်မျိုးဆက်သစ် တိုးတက်ရစ်ဖို့ အတွက် စေတနာသဒ္ဓါတရားနည်းများမဆို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:35 AM
Grab your weapons that are necessary for your battle of life …
Stand on your own foot by yourself …
And practice till you are skilful enough to defeat your competitor …
You should never leave your seat …
Put on the audience with your great talent …
And then show off …
The only thing you need is faith …
You wish you could do like your prime generation …
Let’s haveaworld inagaze to you …
And then leave the whole crowd in awe …
I could swear … you are the one!
အင်တာနက်ဆိုင်ထဲ လူကလဲ ထူ၊ ပူကလဲ ပူနဲ့၊ အတော်အနေရ အထိုင်ရ ခက်နေပါ့ဗျာ။
မီးကလဲ မလာတော့ မီးစက်က အဲယားကွန်းစက်တွေကို မနိုင်လို့ ဖွင့်မရ၊ ဒုက္ခပါဗျာ။
ဒါတောင် စောစောကဘာ လူလည်လုပ်ပြီး ရှိတဲ့ပန်ကာလေး ၂ လုံးကို
မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုယ်ထိုင်တဲ့ဘက် အသာလှည့်ထားလို့ နေသာတာပါ။
ကိုယ့်လိုလူလည်နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာလို့ ပန်ကာကို သူ့ဘက်ပြန်လှည့်သွားရင်
ဆက်ထိုင်လို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ထပြေးရတော့မှာပါ။
အခုဆို ၄၃ စင်တီဂရိတ် ၁၁၃ ဖာရင်ဟိုက်လောက် ရောက်နေပါ့ဗျာ။
မိုးအ၀င်နောက်ကျပြီး မိုးအထွက်စောမယ်လို့ မှန်းကြတယ်။
မိုးမလာသေးရင် ရေလာသေးမှာ မဟုတ်။
ရေမလာသေးရင် မီးကလည်း လာဦးမှာ မဟုတ်ပါ။
အဓိကပြောချင်တာက ခုရက်ပိုင်းကြားနေရတဲ့သတင်းလေးတွေနဲ့ ဆက်စပ်လို့ပါ။
အပူဒဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စပ်မိစပ်ရာ သတင်းလေးတွေပါ။
အခုဘဲ ဗွိုက်စ်ဂျာနယ်ထဲ ဖတ်လာရပါတယ်။ ကမာရွတ် လှည်းတမ်းမီးပွိုင့်မှာပါ။
နေ့လည်ခင်းအချိန် တက္ကစီယာဉ်မောင်းက မီးပွိုင့်ကို ကားရပ်စောင့်နေတုန်း
အိုက်လွန်းလို့ ရေခဲရေ ၀ယ်သောက်ပါသတဲ့ဗျ။
ရေခဲရေတ၀သောက်ပြီး ရေခဲရေနဲ့ဘဲ မျက်နှာဆက်သစ်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျ။
သူ့ခမျာ နေရထိုင်ရ အတော်အဆင်ပြေသွားပုံပါ။
ဒါတင်မက၊ ရေခဲရေကို သူမှာပါလာတဲ့ချွေးသုတ်တဘက်လေးကို
ရွှဲနေအောင် စွတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါလေးနဲ့ သူ့လည်ပင်းပတ်ထားရင်း
အဲဗျာ၊ ဖြစ်ချင်တော့ မီးပွိုင့်တောင် တစ်ကြိမ်မစိမ်းသေးဘူး။ အဲဒီပုံစံနဲ့ဘဲ ဦးဏှောက်ကြောပြတ်ပြီး
မီးပွိုင့်စောင့်ရင်း ကားပေါ်တင် ခေါင်းကြီးဇက်ကျိုးကျရင်း ကိစ္စပြတ်သွားရှာတယ်တဲ့ခင်ဗျ။
ပြီးခဲတဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလဲ သမံတလင်း ရေလောင်းပြီး အဲဒီအပေါ်ဖျာခင်းအိပ်ရင်း
လေဖြတ်ပြီး ကိစ္စတုံးသွားတာတို့၊ ခြင်ထောင်ကို ရေစွတ်၊ ဖျာကို ရေစွတ်ပြီး
အိမ်အပြင်ထွက် အိပ်လိုက်ကြတဲ့ လင်မယားအစုံလိုက်တွေ၊
မနက်ကျတော့ တကိုယ်လုံးတောင့်တင်းပြီး အနိစ္စရောက်ကုန်တာတို့ ကြားရပါတယ်။
အခုလို ပူလွန်းတဲ့အချိန်မှာ ဒါတွေကို ဂရုစိုက်ဘို့ လိုပါတယ်။
လူက အပူဒဏ်ကို အသင့်အတင့်ခံနိုင်ပေမဲ့ အပူအအေးရုတ်တရက်ကွာခြားမှု ဒဏ်ကိုတော့
Temperature Shock ကို ခံနိုင်ရည် လုံးဝ မရှိပါဘူး။
ခန္ဓာကိုအပူချိန်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ၃ ဒီဂရီလောက် ရုတ်တရက်ခြားနားသွားရင်
ပြဿနာ စဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန် ၅ ဒီဂရီလောက် ရုတ်တရက်ခြားနားသွားရင်
လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ဇီဝတုန့်ပြန်ပုံတွေက ထူးဆန်းပါတယ်။
သွေးကြောတွေ ကြွက်သားတွေက အပူချိန်ခြားနားမှုအလိုက် ချက်ချင်းတုန့်ပြန်ပါတယ်။
ခုနလို ချက်ချင်းအေးသွားရင် ကြွက်သားတွေ သွေးကြောတွေက ကြုံ့သွားပါတယ်။
ပြီးမှ ခဏနေမှ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့ ချိန်ညှိရင်း ခန္ဓာကိုယ်က နဂိုပုံမှန် ပြန်ရောက်ပါတယ်။
ခုန တက္ကစီယာဉ်မောင်းဆိုရင် ရေခဲရေအ၀တ်နဲ့ လည်ပင်းအပတ်မှာ လည်ပင်းသွေးကြောမကြီး အပူအအေးကွာခြားတာကြောင့် ချက်ချင်းကြုံ့သွားပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ သွေးကြောတွေ အညှစ်ခံရသလို အဖိခံရသလိုဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက်သွေးဖိအားတက်သွားကာ ဦးဏှောက်ထဲက သွေးကြောတချို့ ပေါက်သွားတာပါ။
အပြင်နေပူပူကနေ အဲယားကွန်းအခန်းထဲ ချက်ချင်းဝင်လိုက်ရင်
ဘယ်သူမဆို ကြက်သီးထဘူးကြမှာပါ။ ဒီသဘောပါဘဲ။ ကြွက်သားတွေက တုန့်ပြန်ပြတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် အိုက်တယ်ဆိုပြီး ထင်ရာမလုပ်ကြဘို့ အဓိကပြောချင်တာပါဗျာ။
နေပူပူအချိန်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို အထူးဂရုစိုက်ကြပါဗျာ။
ခုနပြောသလို အပူအအေးကို နည်းမှန်လမ်းမှန်လေးဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပြီး ကြည့်ပေးကြပါ။
ပြီးတော့ ဒီအချိန်မှာ အစားအသောက်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ သွေးတက်စာကတော့ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်တော့လို့ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းယောက္ခမကြီး ဆုံးသွားပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ။ သူငယ်ချင်းယောက္ခမကြီးက သူ့သူငယ်ချင်းအလှူကို သွားချင်တယ်ဆိုလို့
သူငယ်ချင်းက လိုက်ပို့ပါတယ်။ ဟိုကျတော့ လား လား၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကျွေးပါတယ်။
သားမက်က ယောက္ခမကို အဲ့ဒါတွေမစားဘို့ တားပါတယ်
ယောက္ခမက စိတ်ဆိုးပြီး သူ့ကို ဆရာလာမလုပ်ဘို့ အချီအချစကားများရင်း နောက်ဆုံး
အလှူမှာ ခေါက်ဆွဲတစ်ပုဂံဘဲစားဘို့ ယောက္ခမက ဈေးတည့်သွားပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ အလှူလုပ်တဲ့အိမ်က အုန်းသီးခြစ်သည့်လုပ်ငန်းငန်းလုပ်တဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှိပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့အလှူမှာကျွေးတဲ့ အုန်းနို့ကတော့ ထူးထူးရှယ်ပေါ့ဗျား။
ဒါနဲ့အပြန်မှာ အိမ်ကျ သူ့မိန်းမအဆူခံရ မစိုးလို့ သူငယ်ချင်းက သူ့ယောက္ခမကို သံပုရာရည်ကို
အိမ်မပြန်ခင်ကတည်းက လမ်းမှာသောက်သွားဘို့ ဆရာထပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ယောက္ခမကလဲ သူနေမကောင်းလာရင် သူ့မိန်းမကြီးက ပွစိပွစိ ဆူမစိုးလို့
သံပုရာရည်ကို ကြိုသောက်ထားဘို့ စောဒကပြန်မတက်ဘဲ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သားမက်ရယ် ယောက္ခမရယ်၊ ဈေးထဲဝင် သံပုရာရည် ချဉ်ချဉ်လေး ၂ခွက်မနတုန်းရှိပါသေးတယ်။
ယောက္ခမကြီး ခွေးချေပေါ်ထိုင်ရာကနေ ဗြုန်းဆို အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားပြီး
ပါးစပ်က တခွီးခွီးနေအောင် သွေးတက်ရင်း ကိစ္စပြတ်သွားပါရောခင်ဗျ။
ဆက်ရေးချင်ပါသေးတယ်ချင်ဗျာ၊ အခု ပန်ကာလေက ကိုယ့်ဘက်မှာ မရှိတော့ဘူး။ အတော်အိုင်လာလို့ မနေနိုင်တော့လို့ ထပြန်ရတော့မှာပါ။
ခုနပြောတဲ့ အုန်းနို့တို့၊ ဒန်ပေါက်တို့၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးတို့၊ ငါးသလောက်တို့က
ခုလိုနေပူပျင်းချိန်မှာ အစားမတော် တလုပ်ပါဗျာ။
အိုက်တယ်ဆိုပြီး ခဏလေးအေးရင်ပြီးရော၊ တဒင်္ဂအပူသက်သာရင် ပြီးရော မဆင်မခြင်နေမိတာကလဲ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်ဘို့ လိုပါသဗျာ။
ဒီစာလေးဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျူးပစ်ကြီးများ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ကြပါဗျာ။
ကြုံတဲ့သူတွေ သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်သားတွေကို ပြောပေးကြပါဗျာ။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး အပူဒဏ်ကနေ သက်တောင့်သက်သာ ရှိကြပါစေ။
ဘယ်အမျိုးကောင်းသားကများ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ကျောင်းတွေ စပြန်ဖွင့်ထားသလဲ မသိပါ။
သန်လျင်၊ မှောဘီ၊ လှိုင်သာယာ၊ လှော်ကားကျောင်းသားများအတွက်ကတော့
ငရဲကြီးတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးလား၊ မေးရမလိုပဗျား။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:40 AM